Oovimba baseSyngenta- Ilungelo laseMelika lokwazi
ezaposwa ngomhla Aprili 9, 2021 by UCarey Gillam
Amagqwetha amangalela inkampani yemichiza yaseSwitzerland iSyngenta bacela iphaneli yezomthetho yase-US ukuba idibanise ngaphezulu kweshumi elinesihlanu lezimangalo ezifanayo phantsi kweliso lejaji yomanyano eCalifornia. Eli nyathelo luphawu oluchazayo lokwandiswa kwezimangalo ezibanga ukuba imveliso yokubulala ukhula yenkampani ibangela isifo sikaParkinson.
Ngokutsho kwisindululo, ifayilishwe umhla we-7 ku-Epreli yi-Texas-based Fears Nachawati firm firm kunye ne-US Judicial Panel kwi-Multidistrict Litigation, kungoku nje kukho ubuncinci amatyala ali-14 afakwe ziifemi ezisibhozo zomthetho kwiinkundla zomdibaniso ezahlukeneyo ezintandathu kwilizwe liphela. Amacala onke afakwe egameni labamangali abafunyaniswe benesifo se-neurodegenerative, kwaye batyhola ukubhencwa kwababulali bokhula baseSyngenta abenziwe ngemichiza ebizwa ngokuba yiparaquat yesifo. Amanye amatyala aliqela enza izityholo ezifanayo zilindelwe kwiinkundla zamazwe.
"La matyala ngawona magqwetha alungeleleneyo kwityala elingaphambi kokuthethwa kwetyala kuba avela kwityhefu enye enetyhefu edala isifo esikhubazekayo esibangelwa kukungaziphathi kakuhle kwabamangalelwa abathathu," uloyiko uNachawati ngokufutshane ukuxhasa yokuhamba kwayo ithi. "UMovant ulindele ukuba inani lamatyala afanayo afakwe kwiinkundla zikarhulumente kunye nelizwe liphela lizakwanda ngokukhawuleza."
Isindululo sifuna ukugqithiselwa ngokukodwa kwiJaji u-Edward Chen kwiNkundla yeSithili sase-US kwiSithili saseMantla saseCalifornia.
UMajed Nachawati, iqabane lenkampani eyoyikayo iNachawati, uthe inkampani isaphanda ubungakanani nobubanzi besimangalo sisonke kodwa ikholelwa kwelokuba ukumiswa kweparaquat ngokuchasene neSyngenta “kuzakubaluleka kwaye kubaluleke kwindalo…”
"Kungekudala, kuzakubakho isimangalo kwiinkundla zomanyano kwilizwe liphela," utshilo uNachawati.
Amagqwetha abamangali bazakufuna amaxwebhu angaphakathi enkampani kunye nokufakwa kwamagosa eenkampani ahambelana "nokuvavanywa, ukuyilwa, ukufakwa iileyibhile, ukuthengiswa, kunye nokukhuselwa kweeparaquat herbicides," kunye nophando oluhlangeneyo kunye nokuvavanywa kobutyhefu kunye nokukhuseleka kweparaquat yayo. iimveliso.
IMiller Firm yaseVirginia, encedise ukukhokelela kwisimangalo seRoundup ngokuchasene neMonsanto esikhokelele kwisigqibo se- $ 11 lezigidi kunye nomnini weMonsanto uBayer AG, uphakathi kweefemu zomthetho ezijoyina isimangalo separaquat. Inkampani yaseMiller ixhasa iinzame zokudibanisa iintshukumo zomdibaniso eCarlifonia, apho amawaka amatyala eRoundup adityanisiwe kwenkqubo yamatyala, ngokwegqwetha elikhokelayo lenkampani uMike Miller.
"Siqinisekile ukuba inzululwazi iyaluxhasa ngamandla unxibelelwano phakathi kwe-paraquat kunye nokutshatyalaliswa kwesifo sika-Parkinson," utshilo uMiller ngesindululo. "ISithili saseMantla saseCalifornia sinezixhobo ezifanelekileyo zokujongana nala matyala."
Amatyala ngokuchasene neSyngenta ukwabiza i-DRM Phillips Chemical Co njengommangalelwa. I-DRM isasazwa kwaye ithengise iimveliso ze-Gramoxone paraquat e-United States ngokuqala ngesivumelwano nomanduleli wase-Syngenta obizwa ngokuba yi-Imperial Chemical Industries (ICI), eyazisa nge-Gramoxone esekwe yiparaquat ngo-1962. Phantsi kwesivumelwano selayisensi, i-DRM yayinelungelo lokwenza, ukusebenzisa, kwaye uthengise ukwenziwa kweparaquat eMelika
USyngenta noChevron bayaziphika izityholo.
USyngenta uthi iimveliso zayo zeparaquat zivunyiwe njenge “zikhuselekile kwaye zisebenza” ngaphezulu kweminyaka engama-50 kwaye “iya kuzikhusela” ngamandla. ISyngenta yeyabanini beChina National Chemical Corporation, eyaziwa ngokuba yiChemChina.
Isifo sikaParkinson sisifo esinganyangekiyo esiqhubela phambili esichaphazela iiseli zemithambo-luvo kwingqondo, sikhokelela kumatyala aphambili kukudodobala komzimba kakhulu kwaye kuhlala kuluphazamiseko engqondweni. Iingcali ezininzi zika-Parkinson zithi esi sifo sinokubangelwa luluhlu lwezinto, kubandakanya ukubhencwa kwizibulali zinambuzane ezinje nge paraquat, kunye nezinye iikhemikhali.
Izifundo ezininzi zesayensi ziye idityaniswe neparaquat kwiParkinson's, kubandakanya isifundo esikhulu samafama ase-US ngokudibeneyo abekwa esweni ziiarhente zikarhulumente zase-US ezininzi. Oko Uphando ngo-2011 uxele ukuba abantu abasebenzisa i-paraquat baphindwe kabini amathuba okuphuhlisa isifo sika-Parkinson njengabantu abangasisebenzisanga.
"Izifundo ezininzi zesifo esihambelana nezifo kunye nezilwanyana ziye zadibanisa iparaquat nesifo sikaParkinson," utshilo uRay Dorsey, unjingalwazi weeurology kunye nomlawuli weZiko loNyango loNyango loLuntu kwiYunivesithi yaseRochester eNew York. UDorsey ukwangumbhali we incwadi malunga nokuthintela kunye nokunyanga isifo sikaParkinson.
"Ubungqina obudibanisa iparaquat nesifo sikaParkinson yeyona nto yomeleleyo kuyo nayiphi na into yokubulala izinambuzane esetyenziswa ngokuxhaphakileyo," utshilo.
Olunye uphononongo alufumananga unxibelelwano olucacileyo phakathi kweparaquat kunye neParkinson kunye neSyngenta iqinisekisa ukuba olona phando lwamva nje nolunegunya alubonisi nxibelelwano.
Ewe kunjalo, isifundo papashwe kwi2020 ifumene unxibelelwano phakathi kwezinye izitshabalalisi kunye neParkinson's, kodwa abukho ubungqina obomeleleyo obubonisa iparaquat ebangela esi sifo.
Ityala elinye elifakwe kwinkundla yelizwe licwangciselwe ukuba lixoxwe kwinyanga ezayo. IHoffman V. Syngenta icwangciselwe ukuxoxwa kwetyala ngoMeyi 10 eSt. Inkomfa yobume icwangciselwe ukuphela kwale nyanga.
Igqwetha laseMissouri uSteve Tillery, omele abamangali kwityala lika-Hoffman kunye nabanye abamangalelwa kwamanye amaphepha-mthetho, uthe nangona uSyngenta eqinisekile, uqokelele ubungqina obuquka iirekhodi zenkampani zangaphakathi ezibonisa ukuba iSyngenta yazi amashumi eminyaka ukuba Imveliso ibangela isifo sikaParkinson.
“Akufanelekanga ukuba bayayithengisa le mveliso, utshilo uTillery. "Le khemikhali kufuneka ingabikho kwimarike."
IParquat yokuLinga ukuLinga, Pesticides imichiza, inkundla, isifo, indawo, zolimo, ukutya, impilo, herbicides, umthetho, ulwaphulo, paraquat, Isifo sikaParkinson, inambuzane, ISyngenta, ukubulala ukhula
ezaposwa ngomhla January 13, 2021 by UStacy Malkan
Jonga amaphepha e-USRTK, ngokusekwe kumaxwebhu afunyenwe kuphando lwethu, ukunika ingxelo ngabantu besithathu ababandakanyeka kukhuseleko kumzi-mveliso wokubulala izitshabalalisi: Ukulandelela iNethiwekhi yePropaganda yoShishino lweePilisi.
Ukubeka njengentatheli kwiilingo zomhlaza weMonsanto
Iimbali zobuqhetseba: I-FleishmanHillard, uKetchum
Kutheni nayiphi na inkampani ibeka uFleishmanHillard okanye uKetchum, bobabini bangabanini be-PR conglomerate u-Omnicom, phambi kwemizamo yokukhuthaza ukuthembana kunzima ukuyiqonda. Zombini ezi nkampani zineembali ezinde zenkohliso ebhaliweyo. Umzekelo:
Ukubonisana ne-FTI: ukukhohliswa kwemozulu, amaqhina ecuba
Ukutya kwengqondo, GMO, Uphando lwethu, Pesticides I-BASF, Bayer, UBill Mashek, CBI, Corteva, IBhunga leNgcaciso yeBiotechnology, DowDuPont, Amandla kubunzulu, ExxonMobil, UmfundiHillard, IFransi 24 iTV, UFrancois Veillerette, Ukubonisana ngeFTI, Iimpendulo zeGMO, UKetchum, Le Monde, UMat Dempsey, UMIchael Sandoval, IMonsanto, Ifayile yeMonsanto, I-Omnicom, Abacebisi bePublicis, Faka phakathi, URJ Reynolds, USegolene Royal, ISyngenta, IZiko lecuba, Yunivesithi yaseFlorida
Iprojekthi yeJon Entine yoFundo lokuFunda nokuBhala: Abathunywa be-PR beMonsanto, iBayer kunye neShishini leMichiza
ezaposwa ngomhla Oktobha 7, 2020 by UGary Ruskin
UJon Entine ngumseki kunye nomphathi olawulayo kwiProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala, iqabane eliphambili kwimizamo yobudlelwane noluntu eMonsanto ukukhusela nokukhusela iimveliso zezolimo. U-Entine wayeyintatheli eyazibonakalisa njengegunya kwinjongo yesayensi, kodwa ubungqina obuchazwe kweli phepha lubonisa ukuba usebenze ixesha elide kwi-PR kunye nonxibelelwano olunzulu kumzi mveliso weekhemikhali kwaye Inkxaso mali yemizi engachazwanga.
Imvelaphi njengeMonsanto PR eqinile
Ukungena ngumseki kwaye inqununu ye-ESG MediaMetrics, inkampani yobudlelwane noluntu eyayine IMonsanto njengomthengi kwi2011 xa iqina ubhalise i-GeneticLiteracyProject.org kwesizinda.
I-Entine yayiqeshwe ngelo xesha ziinkonzo zeStatistical Assessment Services (STATS), iqela elingenzi nzuzo elichazwe ziintatheli njenge “iphulo lokungazichazi”Ukuba ilungelelana nezikhundla zeshishini Ukujongela phantsi impilo. Iprojekthi ye-Genetic Literacy Project yaphuhliswa “njengenkqubo yoluleko enqamlezileyo nee-STATS,” ngokuka Oovimba bewebhu. Ngo-2015, iprojekthi ye-Genetic Literacy Project yahamba phantsi kweambrela yeqela elitsha, iProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala, eyafumana ilifa le-STATS inombolo yesazisi.
STATS yayi "Umdlali ophambili kwiphulo lobudlelwane noluntu ukungcolisa inkxalabo malunga ne-bisphenol A,”Ngokutsho kwe Milwaukee Journal Sentinel. Umbutho wabazali, iZiko leMithombo yeendaba kunye neMicimbi yoLuntu (CMPA) ihlawulwe yingxilimbela yecuba UPhillip Morris ngeminyaka yoo-1990 “ukukhetha amabali agxeka ukutshaya.” U-Entine wayengumlawuli we-CMPA kwi-2014/2015, ngokuka kwiifom zerhafu.
IMonsanto yayingumthengi we-Entine's PR xa yayibhalisa i-domain ye-Genetic Literacy Project.
Iprojekthi ye-Genetic Literacy Project ihlasela rhoqo izazinzulu, inzululwazi, intatheli kunye nabanye abagxeka iMonsanto okanye iimveliso zayo. Amaxwebhu afunyenwe ngu Ilungelo lase-US lokwazi kwaye ngetyala baqinisekise ukuba amaqabane eMonsanto kunye ne-Entine ne-GLP kwiiprojekthi ze-PR ukukhuthaza nokukhusela ii-GMO kunye nezibulala-zinambuzane. Olu bambiswano aluchazwanga.
A Isicwangciso se-Monsanto PR se-2015 amagama eProjekthi yemfuzo kuLwazi lokuFunda nokuBhala phakathi "Amaqabane oshishino" IMonsanto icwangcise ukubandakanyeka kwiinzame zayo "zokulungisa isikhalazo" malunga a ingxelo yomhlaza evela kwi-Arhente yeHlabathi yoPhando ngomhlaza (IARC). Injongo kaMonsanto, ngokwesicwangciso se-PR: "khusela igama" leRoundup. I-GLP sele ithunyelwe ngaphezulu kwama-200 amanqaku malunga ne-IARC, uninzi lwazo ukuhlasela izazinzulu as buqhetseba kwaye amaxoki ngobani o iqhutywa yinzuzo kunye namampunge.
Ukuphumelela ibhaso Uphando lweLe Monde malunga "neMonsanto Papers" ichaze iProjekthi ye-Genetic Literacy Project njenge "webhusayithi eyaziwayo yepropaganda" "eyondliwa ngabantu be-PR abanxulumene namayeza okubulala izitshabalalisi kunye nebiotechnology." Iprojekthi ye-Genetic Literacy Project yadlala indima enkulu kwimizamo kaMonsanto “yokutshabalalisa iarhente yomhlaza yeZizwe eziManyeneyo nangayiphi na indlela,” uxele uLe Monde.
Kwifayile yenkundla ka-2017, amagqwetha abamangali abamangalela iMonsanto malunga nexhala lomhlaza we-glyphosate abachaze iProjekthi ye-Genetic Literacy Project kunye ne-American Council on Science and Health "njengemibutho ejonge ukuhlazisa oososayensi kunye nokuqaqambisa ulwazi oluluncedo kuMonsanto nakwabanye abavelisi bemichiza."
Iphepha le-Pro GMO ngoonjingalwazi
Ngo-2014 nango-2015, iProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala isebenze neMonsanto kunye nenkampani yabo ye-PR ukupapasha nokukhuthaza uthotho lwamaphepha e-pro-GMO abhalwe ngoonjingalwazi. IMonsanto yabelwa kwaye yahlelwa amaphepha, kwaye isete iProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala ukuze iwashicilele. Indima yombutho khange ichazwe.
Unjingalwazi waseHarvard wasilela ukuveza uxhulumaniso lweMonsanto, Boston Globe
Yenziwa njani iMonsanto yokuHlaziya iziFundo kwiiPeni kumanqaku axhasa iiGMOs, Bloomberg
Ngokwe-imeyile kaSeptemba 2014, Abaphathi beMonsanto bakhethe iProjekthi ye-Genetic Literacy Project njengeyona “ndawo iphambili” yokupapasha amaphepha oonjingalwazi, kunye nokwakha “isicwangciso sokurhweba” nenkampani ye-PR i-CMA ukukhuthaza amaphepha. I-PR eqinile i-CMA, ngoku ebizwa ngokuba yi-Look East, ilawulwa nguCharlie Arnot. Ubaleka nayo Iziko lokuDibana kokutya, engenzi nzuzo efumana inkxaso-mali kwiMonsanto, kananjalo inikela ku Iprojekthi yemfuzo yokuFunda nokuBhala.
Amaqhina eSyngenta kunye neqela eliphambili loshishino
ISyngenta yayixhasa ngemali i-ACSH xa yayipapasha incwadi ka-Entine ikhusela isibulali zinambuzane saseSyngenta.
UJon Entine usondelelene kakhulu kunye Ibhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo (ACSH), iqela eliphambili elidibeneyo ifumana inkxaso-mali kwiMonsanto kunye nezinye iinkampani zamachiza. I-ACSH yapapasha incwadi ka-Entine ka-2011, ekhusela i-atrazine, iyeza lokubulala izitshabalalisi elenziwa yiSyngenta. Ukunika ingxelo ngo UTom Philpott kuMama uJones kwaye i Iziko leMidiya kunye neDemokhrasi baqinisekise ukuba iSyngenta yayixhasa ngemali i-ACSH ngelo xesha, kwaye i-ACSH icele iSyngenta ukuba ibonelele ngenkxaso-mali eyongezelelweyo yeprojekthi ebandakanya incwadi evakala ngathi yincwadi ka-Entine. USyngenta wayefuna amaqabane angaphandle ukuba ancede inkampani khusela i-atrazine.
In 2009, Abasebenzi be-ACSH babuze iSyngenta yesibonelelo seedola ezili-100,000, “eyahlukileyo neyahlukileyo kwinkxaso yokusebenza ngokubanzi iSyngenta ibibonelela ngesisa kule minyaka idlulileyo,” ukuvelisa iphepha kunye "nencwadana elungele abathengi" malunga neatrazine. Ngo-2011, I-ACSH ibhengeziwe Incwadi entsha ka-Entine kunye "nephepha elinobuhlobo, elifinyeziweyo," zombini zikhusela i-atrazine. U-Entine uxelele uPhilpott ukuba "akayazi" iSyngenta yayixhasa ngemali i-ACSH.
Umxholo ophambili: uhlaselo lwenzululwazi kunye neentatheli
Umxholo ophambili emsebenzini ka-Entine uhlasela oososayensi kunye neentatheli ezixela ngokunzulu malunga nomzi mveliso weekhemikhali, ishishini leoyile okanye iingxaki zempilo ezinxulumene nazo. Eminye imizekelo:
Kuhlaselwe New Yorker Intatheli uRachel Aviv ukuzama ukumhlazisa Ukunika ingxelo ngamaxwebhu angaphakathi eSyngenta etyhila indlela le nkampani yemichiza ezame ngayo ukutshabalalisa igama lika-UC Berkeley uNjingalwazi uTyrone Hayes ngenxa yophando lwakhe oludibanisa i-herbicide atrazine neziphene zokuzalwa kumasele. Owona mthombo uphambili yayinguBruce Chassy, ​​unjingalwazi owayenguye cwaka eyamkela imali ukusuka eMonsanto kwaye ndanceda ukuqala Iqela eliphambili leMonsanto ukuhlasela abagxeki beshishini.
Kuhlaselwe UNjingalwazi waseHarvard uNaomi Oreskes, umbhali-mbhali we Abathengisi Bokungabaza, "njengeLuddite edumileyo, iRottweiler ekrelekrele yobuso bakho, imekobume, iyilumkele ngokungeyomfuneko itekhnoloji yale mihla."
Ummangalelwe Umphathi weColumbia yoBuntatheli uSteve Coll kunye nentatheli uSusanne Rust "wokuthambisa u-Exxon" ngokunika ingxelo yokuba u-Exxon wayesazi iminyaka ukuba utshintsho lwemozulu lwaluyinyani kodwa wafihla inzululwazi ukugcina ingeniso iqhubeka.
Kwi uhlaselo olulandelayo (okoko isuswe kwifayile ye- IHotff Post iwebhusayithi), u-Entine utyhola iRust yokuphula umthetho wokuziphatha kwakhe ngokunika ingxelo kuthotho lokuphumelela amabhaso kwi-BPA Uluhlu olufutshane kwiBhaso likaPulitzer; I-Entine ayichazanga ukuba ingxelo yakhe ichonge umqeshi wakhe we-STATS njenge Umdlali ophambili kwimizamo ye-PR yomzi mveliso.
Umzila weNkxaso-mali kaMurky yokuNgena kunye ne-GLP
Imbali yenkxaso mali yokungena inzima kwaye ilungile, kodwa amaxwebhu erhafu kunye nokuveza kwakhe ukuveza ipatheni yenkxaso mali evela kwimithombo engaziwayo nakwiziko lephiko lasekunene ukunyanzeliswa kwemida kunye nokwaliwa kwesayensi yemozulu, kunye nemali engachazwanga evela kwishishini le-biotechnology.
Inqaku elichanekileyo nelisoloko litshintsha "elubala"
Inqaku elithi "Ukucaca kwezezimali" kwiwebhusayithi yeProjekthi ye-Genetic Literacy ayichanekanga, iinguqu rhoqo kwaye ngamanye amaxesha ziyaziphikisa. Ngo-2017 nango-2018, iProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala ibanga ukuba ifumene inkxaso-mali ukusuka kwiziseko ezimbalwa kubandakanya iziseko zeTempleton kunye neSearle, ezi abaxhasi abakhokelayo kwiinzame zesayensi yemozulu. I-GLP ikwaphawula imali evela kwiZiko lokuDibanisa ukuTya, a icandelo eliphambili lokutya efumana imali kwiMonsanto kunye namaqabane neMonsanto kunye neProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala ukukhuthaza ushishino ngezolimo PR.
In NgoSeptemba 2016, "ukubhengezwa" Inqaku lathi i-GLP ayifumananga nkxaso-mali kumashishini, kodwa iveze i- $ 27,500 ye- "pass through" evela ku- "Academics Review Charitable Association," ebonakala ngathi ayikho. Eli qela ngokucacileyo IziFundoReview.org, iqela eliphambili elifumene uninzi lwenkxaso mali yalo kumzi-mveliso wokubulala izitshabalalisi iqela lezorhwebo, kodwa libanga ukuba lizimeleyo kushishino.
In Ngomhla ka-Matshi 2016, i-GLP ayibhengezi mali kwaye u-Entine wazama ukumisa kude i-GLP kumqeshi wakhe wangaphambili u-STATS, ebanga ukuba i-STATS ibonelela ngeenkonzo zokunika ingxelo kuphela kwaye la maqela akabandakanyekanga kwimisebenzi yomnye nomnye. Kodwa ngo-2012, i-GLP yathi “iphuhliswe njengenkqubo yoluleko kunye ne-STATS. "
Iziko leMithombo yeendaba kunye neMicimbi yoLuntu / iYunivesithi yaseGeorge Mason
Kunyaka-mali 2014 / 2015, ngokweerekhodi zerhafu, u-Entine ufumene i-173,100 yeedola ngomsebenzi wakhe "njengomlawuli" kwiziko leMedia kunye neMicimbi yoLuntu, iqela elisekwe kwiYunivesithi yaseGeorge Mason kwaye yasekwa nguNjingalwazi weGMU URobert Lichter. I-CMPA ihlawulwe nguPhillip Morris kwii-1990s ukuphazamisa inkxalabo malunga necuba ngokwamaxwebhu akwithala leencwadi le-UCSF leCuba.
I-CMPA ayichazi baxhasi bayo kodwa ifumene inkxaso-mali kwiGeorge Mason University Foundation, umamkeli ophambili yeminikelo ehambelana neCharles Koch kunye neKoch Industries. I-GMUF ikwafumene i-5.3 yezigidi zeedola kwi-Donors Trust nakwi-Donors Capital Fund phakathi ko-2011-13, ngokweGciniwe. Ezi mali zesiteshi semali ezivela kubanikeli abangaziwayo kubandakanya neenkampani ukuya kumaphulo kunye nezifundo ezityhala umdla kwishishini, njengoko iGreenpeace ibonakalisile uphando olufihlakeleyo.
STATS Iintlawulo neMali mboleko
Iqela lodade le-CMPA, elisekwe ngu-Lichter kwaye lisekwe kwi-GMU, yayiyi-Statistical Assessment Services (STATS), iqela elingenzi nzuzo elidlale indima ephambili kwimizi-mveliso ye-PR kwimizamo yokukhusela iimveliso eziyityhefu, ngokwe ngxelo Ukuthintela, Milwaukee Journal Journal Sentinel, the Atlantic kwaye Imibiko yabathengi.
STATS ihlawulwe ingeniso $ 140,600 kwi 2012 / 2013 kwaye $ 152,500 ngaphakathi 2013 / 2014 "njengomcebisi kwezophando"
I-STATS kunye neZiko leMithombo yeendaba kunye neMicimbi yoLuntu zombini zidwelise i-Entine njengoMlawuli kwi 2014 / 2015 ngembuyekezo ye- $ 173,100. Iirekhodi zerhafu kuwo omabini la maqela zidwelise noMongameli uTrevor Butterworth nge $ 95,512 kunye noMlawuli uTracey Brown ngaphandle kwembuyekezo. UTracey Brown ngumlawuli weSense malunga neNzululwazi, iqela nalo ijikelezisa isayensi ukukhusela umdla kwimizi-mveliso; EGcuwa Isiseko seSense malunga neSayensi ye-USA Ngo-2014 kwaye zahlanganiswa ii-STATS kwelo qela.
IProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala yeSayensi ithathe i-ID yERhafu ye-STATS kwi 2015 Uluhlu oludwelisiweyo njengoMlawuli oLawulayo ngentlawulo eyi- $ 188,800.
Ngo-2018, i-ESG MediaMetrics, i-Entine's PR firm, uxele i-176,420 yeedola kwingeniso.
IZiko leMithombo yeendaba kunye neMicimbi yoLuntu ikwaboleke imali kwi-STATS, ethi "ngenxa yokungonelanga kwemali" ayikabuyiselwa. Isiseko seYunivesithi yaseGeorge Mason, esingachazangayo inkxaso-mali, sinike izibonelelo zeCMPA ngaloo minyaka. Iirekhodi zerhafu zibonisa:
I-CMPA ibolekise i-STATS $ 203,611 kwi 2012 / 2013 kunye ne- $ 163,914 mboleko 2013 / 2014
Isiseko seYunivesithi yaseGeorge Mason sinike i $ 220,900 2012 / 2013 kwaye $ 75,670 ngaphakathi 2013 / 2014 ukuya kwi-CMPA.
Inkxaso mali kwishishini le-Biotechnology yokuqeqesha oososayensi kunye neentatheli
Ngo-2014 nango-2015, amafemu aphezulu okubulala izitshabalalisi achithe ngaphezulu kwe- $ 300,000 kwiziganeko ezibini eziququzelelwe yiProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala kunye neqela eliphambili eliHlola iziFundo ku “qeqesha izazinzulu kunye neentatheli ukuyila ingxoxo mpikiswano malunga ne-GMOs kunye netyhefu yeglyphosate, ”Ngokweengxelo zerhafu kunye nokwenza ingxelo kwi Inkqubela. Iziganeko, ezibizwa ngokuba Iprojekthi yeeBiotech Literacy Projekthi, zabanjwa kwi IYunivesithi yaseFlorida ngo-2014 kwaye UC Davis ngo-2015.
Ii-ajenda zichaza iminyhadala "njengoqeqesho lwezakhono zonxibelelwano" kwizazinzulu kunye neentatheli ukunceda ukuphinda kuxoxwe ngokhuseleko lokutya kunye nengxoxo ye-GMO, kwaye wathembisa ukubonelela oososayensi "ngezixhobo kunye nezixhobo zokuxhasa eziyimfuneko ukubandakanya amajelo eendaba kwaye babonakale njengeengcali kwezomthetho ukumanyelwa koorhulumente basekhaya, neminye imigaqo-nkqubo kunye namanye amathuba okufikelela kuluntu. ”
I-Faculty ekuqaleni inkampu yokuqala yebhuthi kubandakanya abameli abavela kwicandelo lezolimo, amaqela aphambili kushishino lokutya kunye namaqela orhwebo, kunye nabahlohli be-pro-GMO kubandakanya uNjingalwazi weDyunivesithi yaseFlorida UKevin Folta, kunye neYunivesithi yase-Illinois uNjingalwazi uEmeritus UBruce Chassy, bobabini bamkele inkxaso-mali engachazwanga evela eMonsanto kwaye bakhuthaza ii-GMO kunye namayeza okubulala izitshabalalisi abathembela kuwo ukuthengisa kweMonsanto. Washington Post Umbhali wekholamu yokutya uTamar HaspelNgubani lowo yamkela imali kumdla wezolimo, wayeyintatheli kwi-faculty.
Abaxhasi bezemali besayensi yemozulu
Abaxhasi abakhulu bezezimali be-Entine owayesakuba ngumqeshi we-STATS kunye neqela lakhe langoku leProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala kubandakanya iziseko zamaphiko asekunene- ikakhulu iScaife Foundation, iSearle Freedom Trust kunye neTempleton Foundation - ekhokhela abaxhasi bezokwaliwa kwesayensi yemozulu, ngokwe Ufundo lweDyunivesithi yaseDrexel ka-2013. Jonga uphando lwe-USRTK: Imozulu yeNzululwazi yeNzululwazi yeNzululwazi yezeMozulu yeNgxowa-mali eyityhefu.
Umzi mveliso wokhuselo weKhemikhali
Iminyaka emininzi, u-Entine ebengumkhuseli obalaseleyo kwimidla yeshishini leekhemikhali, elandela incwadi yokudlala yomzi mveliso: uyayikhusela imichiza njengekhuselekileyo; uphikisa ngokuchasene nommiselo; kwaye ihlasele isayensi, oososayensi beendaba kunye nabanye baphakamisa inkxalabo.
Ukukhulisa ubungqina besayensi bucebisa ukuba i-neonicotinoids, iklasi elisetyenziswa kakhulu lamayeza okubulala izitshabalalisi, zezona zinto zibalulekileyo ekufeni kweenyosi. I-European Union ithintele i-neonics ngenxa yenkxalabo malunga nefuthe leenyosi. Inqaku likaFebruwari 2020 kwiThe Intercept nguLee Fang uxele "ngenkqubela phambili yolwazi emfazweni" iinkampani zokubulala izitshabalalisi ezilwela ukugcina imichiza kwintengiso kwi-US Entine ibe ngumthunywa ophambili we-pro-industry; Ubuye wathi i-neonics ayingomqhubi ophambili wokubulawa kweenyosi (I-American Enterprise Institute), ukuba "Inyosi Apocalypse khange ibe yeyokwenyani," (Ibhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo) kunye neonics ezibanga ukuba zinokunceda impilo yeenyosi (I-American Enterprise Institute kwaye Forbes). U-Entine uphinde wahlasela isifundo soprofesa waseHarvard malunga nenyosi iColony Collapse Disorder (I-American Enterprise Institute) kwaye batyhola abapolitiki baseYurophu ngokuzama ukubulala iinyosi ngokuthintela ii-neonics (Forbes).
Iifthalates ludidi lweekhemikhali ezide zinxulunyaniswa nokuphazamiseka kwencindi yedlala, ukwenzakala kokuzala, iingxaki zokuchuma kunye nokunxibelelana nokukhuluphala kwabantwana, isifuba, iingxaki zemithambo-luvo kunye nemicimbi yentliziyo. Urhulumente wase-US waqala ukuthintela imichiza kwinto zokudlala zabantwana ngowama-2013 ngenxa yenkxalabo yezempilo. I-Entine ikhusele iimveliso zabantwana ezineekhemikhali. "Zimbalwa iikhemikhali kwintengiso namhlanje eziye zaphononongwa nzulu njengezenzululwazi ze-phthalate esters," u-Entine wabhala (Forbes) - kodwa khange ayikhankanye umzimba obalulekileyo of ubungqina besayensi Iqulunqwe ngaphezulu kwamashumi amabini eminyaka edibanisa ukubonakaliswa kwe-phthalate ukukhula ngendlela engaqhelekanga in abantwana abangamakhwenkwe. Imiyalezo yayiquka uhlaselo kwiintatheli; U-Entine utyhola intatheli ye-NBC ephakamise imibuzo malunga nokhuseleko "lobuntatheli obungenantlonelo." (Forbes). Inkampani yokungena yonxibelelwano, ESG MediaMetrics, yenze i-PR ye IZiko leVinyl; IVinyl plastiki ingumthombo ophambili wokubhengeza ii-phthalates. U-Entine khange achaze unxibelelwano kushishino kumanqaku akhe eForbes.
I-Entine ikhusela ukuqhekeka ngesanti kubunzulu baphantsi ("fracking"), ukumpompa amanzi ngoxinzelelo oluphezulu lweekhemikhali emhlabeni ukutyhoboza shale kunye nokukhupha irhasi yendalo. Njengakwiminye imikhankaso yakhe yemiyalezo, i-Entine iqhuma inzululwazi kunye nososayensi abaphakamisa inkxalabo, bebenza "njengabaphembeleli," ngelixa besenza ingxelo etshabalalisayo nengathethekiyo malunga nesayensi "ekrelekrele" eqhutywa kwiminyaka emininzi ekhusela ukhuseleko lwayo. Umzekelo, u-Entine ubanga ukuba: "Ngokwezimvo zesayensi, akukho sizathu sokwenza oko U krokrela impilo engaziwayo okanye imiba yokusingqongileyo iya kuvela ”Post New York).
Kwakhona, uhlaselo lwaluyinxalenye ephambili yemiyalezo. U-Entine utyhola intatheli ze-New York Times ngokulahlekisa abantwana malunga neengozi zokusingqongileyo ezinokubakho (Forbes), bahlasele izazinzulu ezimbini zeYunivesithi yaseCornell kufundo lwabo becebisa ukuba imisebenzi yokuqhekeza ivuza imethane (Forbes), kwaye yahlasela iPark Foundation, ibanga ukuba "iphantse yaphazamisa uphuhliso lwerhasi ephuma kwisithili esinee-methane eNew York State, yabeka uphawu kwizimvo zoluntu nakwizigqibo zomgaqo-nkqubo kwilizwe liphela." (Ububele obujikelezayo)
U-Entine ubhala ekhusela ikhemikhali i-bisphenol A (BPA), ngaphandle kobungqina obuninzi besayensi obuphakamisa inkxalabo malunga ne-endocrine yokuphazamisa amandla kunye nezinye iingxaki zempilo ezinxulumene nayo. ICanada ibhengeze ukuba le khemikhali inetyhefu Ngo-2010, kunye ne-EU I-BPA evaliweyo kwiibhotile zabantwana kwi 2011.
I-Entine ihlasele abaphandi beyunivesithi, ii-NGO kunye neentatheli ziphakamisa inkxalabo malunga ne-BPA (Forbes), Wacebisa ukuba abasetyhini abangakwaziyo ukukhulelwa akufuneki bayibeke ityala kwiiplastikhi (Forbes), kwaye wacela umngeni kwizazinzulu ezazidibanisa iBPA nesifo sentliziyo (Forbes).
Ukukhusela aMandla eNyukliya
I-Entine ikhusela ishishini lamandla enyukliya; Ubanga ukuba izityalo zamandla enyukliya zikhona okusingqongileyo nokuba “akukho nto imbi njengeChernobyl enokwenzeka naseNtshona.” Utyhola uNjingalwazi waseHarvard uNaomi Oreskes inzululwazi "ukukhanyela," kuba, phakathi kwezinye izinto, ukubonisa umngcipheko wezoqoqosho kunye nokusingqongileyo kwamandla enyukliya.
U-Entine wayengumntu ongahlawulelwanga kwiZiko lezeMpilo kunye noNxibelelwano lomngcipheko kwiYunivesithi yaseGeorge Mason (GMU) ukusukela ngo-2011 ukuya ku-2014. abanikeli bayo, kunye umntu otyeleleyo kwiZiko laseMelika lamaShishini, itanki lokucinga leDC lixhaswe ngemali yinxalenye ngu Iqumrhu kwaye imali emnyama iminikelo.
Bona kwakho, Iphepha leGreenpeace Polluter Watch kuJon Entine kunye no “ibali elifihliweyo leProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala. "
Amaqela ahambelana nabantu
Ibhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo
UPamela Ronald kunye no-UC Davis
Iiprojekthi zeBiotech Literacy
Ukutya kwengqondo, IHolo leentloni, Uphando lwethu Uphengululo lwezifundo, IziFundoReview.org, Ibhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo, I-American Enterprise Institute, UAmy Harmon, Iprojekthi yeeBoot Camp kwiBiotechnology, UBruce Chassy, Iziko lokuDibana kokutya, Iziko lezeMpilo kunye noNxibelelwano loMngcipheko kwi-GMU, Iziko leMithombo yeendaba kunye neMicimbi yoLuntu, UCharles Koch, Chemophobia, CMA, INgxowa-mali yeNkunzi yeNxaso, Abaxhasi beTrust, U-Eric Sachs, I-ESG MediaMetrics, IProjekthi yokuFunda ngokuBhala, University of George Mason, Isiseko seYunivesithi yaseGeorge Mason, Isiseko sikaJohn Templeton, UJon Entine, UKeith Kloor, UKevin Folta, Koch Industries, IMonsanto, URobert Lichter, Isiseko seScaife, Iprojekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala yeNzululwazi, ISearle Freedom Trust, Inkonzo yoVavanyo lwezeNkcukacha-manani, ISyngenta, UTamar Haspel, IZiko le-UC Davis leZiko lokuTya leLizwe lokuTya lokuFunda nokuFunda, Yunivesithi yaseFlorida, KwiYunivesithi yase-Illinois, IZiko leVinyl, Isiseko seWinkler Family
ezaposwa ngomhla Septemba 23, 2020 by UStacy Malkan
Ngaphandle kwegama layo lokuvakala kwezemfundo kunye nokunxulumana neziko le-Ivy League, ICornell Alliance yeNzululwazi (CAS) liphulo lobudlelwane noluntu elixhaswa ngemali yiBill & Melinda Gates Foundation eqeqesha abanye abantu kwihlabathi liphela ukukhuthaza nokukhusela izityalo ezenziwe ngobunjineli kunye nezolimo kumazwe abo. Izifundiswa ezininzi, iingcali zomgaqo-nkqubo wokutya, amaqela okutya kunye nawokulima ziye zakhwaza umyalezo ongachanekanga kunye namaqhinga akhohlisayo amaqabane e-CAS athe azama ukuzama ukunyelisa inkxalabo malunga nezinye iindlela kwezolimo lweshishini.
NgoSeptemba, CAS umemezele Izigidi ezili-10 zeedola kwinkxaso mali entsha evela kwiGates Foundation, izisa iiGates zizonke inkxaso-mali kwi-22 yezigidi zeedola ukusukela ngo-2014. Inkxaso mali entsha iza ngokuba yiGates Foundation ejongene nokubuya emva kulimo lwaseAfrika, ukutya kunye namaqela enkolo Ukuchitha iibhiliyoni zeedola kwizikim zophuhliso lwezolimo eAfrika oko ubungqina bubonisa ukusilela ukuthomalalisa indlala okanye ukuphakamisa amafama amancinci, njengoko beqinisa iindlela zokulima ezixhamla amashishini ngaphezulu kwabantu.
Eli phepha libhala imizekelo emininzi yolwazi olungelulo oluvela kwi-CAS kunye nabantu abanxulumene neqela. Imizekelo echazwe apha inika ubungqina bokuba i-CAS isebenzisa igama likaCornell, isidima kunye negunya lokuqhubela phambili i-PR kunye ne-ajenda yezopolitiko yeyona mibutho mikhulu yemichiza kunye nembewu.
Umsebenzi olungelelaniswe nomzi mveliso kunye nemiyalezo
I-CAS yaphehlelelwa ngo-2014 ngesibonelelo seGates se- $ 5.6 yezigidi kwaye ithembisa “batshabalalise ”ingxoxo malunga nee-GMO. Iqela itsho injongo yayo Kukukhuthaza ukufikelela kwizityalo kunye nokutya ngokuqeqesha “amahlakani ezenzululwazi” kwihlabathi liphela ukuze afundise abahlali ngezibonelelo zebhayoloji yezolimo.
Icandelo leshishini lokubulala izitshabalalisi likhuthaza iCAS
Inxalenye ephambili yesicwangciso-qhinga se-CAS kukugaya nokuqeqesha IiNkokheli zeNkokheli zeHlabathi kunxibelelwano nakumaqhinga okukhuthaza, kugxilwe kwimimandla apho kukho inkcaso yoluntu kushishino lwebiotech, ngakumbi amazwe aseAfrika athe amelana nezityalo zeGMO.
Umsebenzi we-CAS ufana ngokumangalisayo iBhunga loLwazi lweBiotechnology (I-CBI), ishishini lokubulala izitshabalalisi elixhasa ngemali inyathelo lobudlelwane noluntu Isebenzisana neCAS. Iqela loshishino lisebenzele ukwakha ubudlelwane ngaphaya kwetyathanga lokutya kunye qeqesha abantu besithathu, ngakumbi izifundiswa kunye namafama, ukucenga uluntu ukuba lwamkele ii-GMOs.
Imiyalezo ye-CAS iyangqinelana ngokusondeleyo nomzi-mveliso wokubulala izitshabalalisi i-PR: kugxilwe kwi-myopic ekufumaneni izibonelelo ezinokubakho zexesha elizayo zokutya okwenziwe ngemfuza ngelixa kudlalwa, ukungahoyi okanye ukwala umngcipheko kunye neengxaki. Njengemizamo ye-PR yomzi-mveliso, i-CAS ikwajolise kakhulu ekuhlaseleni nasekuzameni ukuhlazisa abagxeki bemveliso yezolimo, kubandakanya oososayensi kunye neentatheli eziphakamisa impilo okanye imeko yendalo.
I-CAS kunye nababhali bayo bathathe ukugxekwa kwizifundiswa, amafama, abafundi, amaqela oluntu kunye neentshukumo zolawulo lokutya abathi eli qela likhuthaza imiyalezo engachanekanga nelahlekisayo kwaye lisebenzisa amaqhinga angafanelekanga. Jonga umzekelo:
Iingcali kwi-agroecology ziyarhoxa kwi-Cornell Alliance ye-Science Agroecology Webinar, zikhankanya ukukhetha -Umanyano loLuntu lwezoBulungisa beHlabathi (9.30.20)
Abathunywa beAgenda yeeGates: Isifundo esenziwe kwiCornell Alliance yeNkqubo yezeNzululwazi yeNkokeli yeHlabathi, yi-AGRA Watch, uManyano loLuntu lwezoBulungisa beHlabathi (8.7.20)
Abafundi bafanele baqhubeke nokubuza i-Ethics ye-Cornell Alliance yeSayensi, NguFern Anuenue, Umdibaniso waseHawaii weNtshukumo eQhubekayo, iCornell yemihla ngemihla (11.19.19)
UMark Lynas wagxeka ngokuxhaphaza imifanekiso yamafama aseAfrika ukukhuthaza ii-GMO, Iziko lase-Afrika lokuPapashwa kweendaba eziphilayo (2018)
Ukusetyenziswa okungagunyaziswanga kukaMark Lynas kwemifanekiso yomfama kwiindlela ezilahlekisayo nezingalunganga zokukhuthaza izityalo ze-GM eTanzaniaIngxelo ka-Eugenio Tisselli, PhD, kunye no-Angelika Hilbeck, PhD. (2018)
Imbewu ye-Neo-Colonialism: Kutheni abaKhuthazi be-GMO befumana okungalunganga malunga ne-Afrika, INgxelo yoMbutho woLawulo lokutya e-Afrika (2018)
Iindlela ezi-6 zale yunivesithi ye-Ivy League esebenza njengefemu ye-PR yokutya okungenamsoco, ii-GMO kunye neyeza lokubulala izitshabalalisiNguSophia Johnson, Salon (2017)
Abalimi baseNew York bacela uCornell ukuba akhuphe 'uManyano lweNzululwazi,' Iprojekthi ye-Bioscience Resource Project release (2016)
Ingxoxo yeGMO: Amava oMfundi omnye wePro-GMO Propaganda kwiYunivesithi yaseConell, NguRobert Schooler, Iindaba zeNzululwazi eziZimeleyo (2016)
IiGates ezixhaswe ngemali yiCornell Group Misfires kuQhankqalazo lweVandana ShivaI-USRTK (2016)
Kutheni le nto iCornell University ibamba iphulo lempembelelo zeGMO? NguStacy Malkan, iEcologist (2016)
IiGates Foundation ezixhaswe yi-Pro-GMO Cornell Alliance yeSayensi kuhlaselo, Intatheli yoLwaphulo-mthetho oluDibeneyo (2015)
Imfazwe yabaGxeki ngokuGuqula ukuTya, NguTimothy Wise, iTanki lokutya (2015)
Imizekelo yemiyalezo elahlekisayo
Iingcali kubunjineli bemfuza, ibhayoloji, i-agroecology kunye nomgaqo-nkqubo wokutya babhale imizekelo emininzi yamabango angachanekanga enziwe nguMark Lynas, umntu owayetyelele eCornell obhale inqwaba yamanqaku ekhusela iimveliso zezolimo egameni le-CAS; Jonga umzekelo wakhe amanqaku amaninzi akhuthazwe yiProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala, iqela PR ukuba isebenza neMonsanto. Incwadi ka-Lynas ka-2018 ithi amazwe ase-Afrika amkele ii-GMO, kwaye anike isahluko ekukhuseleni iMonsanto.
Amabango achanekileyo malunga nee-GMOs
Izazinzulu ezininzi zigxeke uLynas ngokwenza iingxelo zobuxoki, “Ayinasayensi, ayikho ngqiqweni kwaye ayinangqondo”Iingxoxo, ukukhuthaza imfundiso ngaphezulu kwedatha kunye nophando kwii-GMO, Ukuhlaziya icandelo lokuthetha ngamashishini, nokwenza amabango angachanekanga malunga nezibulali zinambuzanebonisa ulwazi olunzulu lwenzululwazi, okanye iinzame ezenziwayo zokuvelisa amathandabuzo. ”
Uluhlu lokuhlanjwa kwezinto uMark Lynas aphosakeleyo malunga nazo zombini ii-GMO kunye nesayensi lubanzi, kwaye luye lwangqinwa ngenqaku ngamanye ngamanye e-agroecologists kunye nezazi zebhayoloji, " kubhale uEric Holt-Giménez, Umlawuli olawulayo weFood First, ngo-Epreli 2013 (uLynas wajoyina uCornell njengomntu owayetyelele kamva kulo nyaka).
"Uyangqina kwaye akananyani"
Amaqela asekwe e-Afrika aye agxeka uLynas ixesha elide. Umanyano lobukhosi bokutya e-Afrika, umanyano lwamaqela okutya kunye namafama angaphezu kwama-40 kwiAfrika iphela uchaze uLynas njenge "ingcungcu" ethi "ukudelela abantu baseAfrika, isiko kunye nesiko lakhe ngokungathandabuzekiyo." Isigidi se-Belay, umlawuli we-AFSA, kuchazwe uLynas "njengohlanga olucacisa ukuba ezolimo kuphela ezinokusindisa iAfrika."
Kwiphepha lokushicilela lika-2018, iZiko lase-Afrika lase-Afrika elise-Biodiversity lichaze amaqhinga angekho mthethweni uLynas awasebenzisileyo ukukhuthaza i-ajenda ye-biotech lobby e-Tanzania. "Kukho umba ngokuqinisekileyo malunga noxanduva lokuphendula kunye [nesidingo] sokulawula i-Cornell Alliance yezeNzululwazi kuyo, ngenxa yolwazi olungeyonyani kunye nendlela abangathembeki ngayo nabangeyonyani," utshilo uMariam Mayet, umlawuli olawulayo weZiko lase-Afrika lezinto eziphilayo ezahlukeneyo, utshilo. kwi Nge-Julayi 2020 kwiwebhu.
Ngolwazi oluneenkcukacha zomsebenzi kaLynas, jonga amanqaku ekupheleni kwale post kunye neyethu Uxwebhu lwenyani lukaMark Lynas.
Umzekelo wakutshanje wemiyalezo engachanekanga linqaku elibekwe ngokubanzi kwi-CAS website nguLynas ebanga ukuba, "i-agro-ecology isemngciphekweni wokonzakalisa amahlwempu." ?? Izifundo zichaze eli nqaku njenge “idemagogic kunye nengcaciso engeyiyo eyenzululwazi yokutolika iphepha lesayensi, ""ngokungathandabuzekiyo, ""ideology emsulwa ”kunye“ neentloni umntu ofuna ukubanga ukuba uyinzululwazi, "a"uhlalutyo oluneziphene ngokwenene“?? lonto yenza “ukwenziwa ngokubanzi“?? kwayeizigqibo zasendle.”Abanye abagxeki bizelwa a Ukurhoxiswa.
A Inqaku le-2019 ngoogxa be-CAS uNassib Mugwanya ubonelela ngomnye umzekelo womxholo olahlekisayo ngesihloko se-agroecology. Inqaku elithi, “Kutheni iindlela zemveli yezolimo zingenakho ukuguqula ezolimo zase-Afrika,” libonisa indlela yokuthunyelwa kwemiyalezo kwizixhobo ze-CAS: ukubonisa izityalo ze-GMO njenge “pro-science” ngelixa kupeyintwa “ezinye iindlela zophuhliso lwezolimo njenge-anti-science, 'engenamhlaba kwaye ayenzakalisi,' ” ngokokuhlalutya ngoMbutho woLuntu wase-Seattle woBulungisa beLizwe.
"Eyona nto iqaphelekayo kwinqaku kukusetyenziswa okukuko kwezikweko (umzekelo, i-agroecology efaniswa nozibophelelo), ukwenziwa kwezinto ngokubanzi, ukushiywa kolwazi kunye nenani lezinto ezingachanekanga," latsho iqela.
Sebenzisa incwadi yokudlala yeMonsanto ukukhusela amayeza okubulala izitshabalalisi
Omnye umzekelo wokulahleka kwemiyalezo ye-CAS ehambelana nomzi mveliso unokufunyanwa kukhuseleko lweqela kwi-Rounduposate esekwe kwi-glyphosate. Amayeza okubulala ukhula yeyona nto iphambili kwizityalo zeGMO I-90% yengqolowa kunye ne-soy zikhulile e-United States yemfuza yenzelwe ukunyamezela iRoundup. Kwi-2015, emva kokuba iphaneli yophando yomhlaza ye-World Health Organisation yathi i-glyphosate yinto enokubangela i-carcinogen yabantu, i-Monsanto iququzelele amahlakani ayo ukuba "acule isikhalazo" ngokuchasene neqela lenzululwazi elizimeleyo "ukukhusela igama" le-Roundup, ngokwe Amaxwebhu angaphakathi eMonsanto.
Incwadi yokudlala ye-Monsanto: ukuhlasela iingcali zomhlaza 'njengabaphembeleli'
UMark Lynas usebenzise i Iqonga CAS ukwandisa umyalezo weMonsanto, echaza ingxelo yomhlaza njenge "ukuzingelwa kwamagqwirha" okwenziwe "ngabaphembeleli be-anti-Monsanto" "abasebenzisa kakubi isayensi" kwaye benze "ukugqwethwa okucacileyo kwesayensi kunye nobulungisa bendalo" ngokunika ingxelo yomngcipheko womhlaza we-glyphosate. ULynas wasebenzisa okufanayo iimpikiswano eziphosakeleyo kunye nemithombo yoshishino njengeBhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo, a iqela eliphambili iMonsanto lihlawulwe ukunceda ukujikeleza ingxelo yomhlaza.
Ngelixa ebanga ukuba usecaleni lenzululwazi, uLynas akabunanzanga ubungqina obaneleyo obuvela kumaxwebhu eMonsanto, ingxelo ngokubanzi kumajelo eendaba, ukuba IMonsanto yaphazamisa kunye uphando lwezenzululwazi, iiarhente zolawulo ezilawulwayo kwaye ndisebenzise enye amaqhinga anzima ukwenza inkqubo yenzululwazi ukukhusela iRoundup. Kwi-2018, ijaji yafumanisa ukuba iMonsanto "Usebenze ngolunya, ingcinezelo okanye ubuqhetseba”Ekugubungeleni umngcipheko womhlaza we-Roundup.
Ukudibanisa amayeza okubulala izitshabalalisi kunye nee-GMO
Nangona eyona ndawo kugxilwe kuyo yi-Afrika, i-CAS ikwanceda kwimizamo yecandelo lokubulala izitshabalalisi ukukhusela izibulala-zinambuzane kunye nokujongela phantsi abameli bempilo yoluntu eHawaii. Iziqithi zeHawaii zibalulekile kwindawo yokuvavanya izityalo ze-GMO kunye nommandla obika phezulu ukubonakaliswa kwemichiza yokubulala izitshabalalisi kwaye inkxalabo malunga neengxaki zempilo ezinxulumene nezifo, kubandakanya iziphene zokuzalwa, umhlaza kunye nesifuba. Ezi ngxaki zikhokelele abahlali ukuba baququzelele umlo othabatha iminyaka Ukupasisa imimiselo eyomeleleyo ukunciphisa ukubhencwa kwezinambuzane kunye nokuphucula ukubhengezwa kweekhemikhali ezisetyenziswa kumhlaba wezolimo.
"Uqalise uhlaselo olukhohlakeleyo"
Njengokuba ezi nzame zifumana ukubambeka, i-CAS ibandakanyeke kwiphulo "lokunxibelelana noluntu malunga nokuchaphazela inkxalabo yoluntu" malunga nemingcipheko yempilo yezibulali zinambuzane, ngokukaFern Anuenue Holland, umququzeleli woluntu kwiHawaii Alliance for Progressive Action. KwiCornell yemihla ngemihla, IHolland ichaze indlela “ehlawulwe ngayo iCornell Alliance yaBafundi bezeNzululwazi- phantsi kwesitayile sobungcali kwezenzululwazi- baqalise ngohlaselo olukhohlakeleyo. Basebenzise imithombo yeendaba kwezentlalo kwaye babhala inqwaba yeebhlog zabo begxeka abahlali abanempembelelo kunye nezinye iinkokheli ezazinesibindi sokuthetha. ”
U-Holland uthe yena namanye amalungu ombutho wakhe babephantsi "kokubulawa kwabalinganiswa, ukumelwa gwenxa kunye nokuhlaselwa ukuthembeka komntu kunye nobungcali" ngabanxulumene ne-CAS. Ubhale wathi: "Ndizibonele ngokwam iintsapho kunye nobuhlobo obungapheliyo."
Ukuchasa ilungelo loluntu lokwazi
UMlawuli weCAS USarah Evanega, PhD, u utshilo iqela lakhe elizimeleyo kushishino: “Asibhalelanga kushishino, kwaye asikhuthazi okanye sikhuthaze iimveliso ezizezeshishini. Njengoko iwebhusayithi yethu ichaza ngokucacileyo nangokucacileyo, asifumani zibonelelo zorhwebo. ” Nangona kunjalo, uninzi lwee-imeyile ezifunyenwe yi-US Right to Know, ngoku ezithunyelwe kwi- I-UCSF yemizi-mveliso yamathala eencwadi, bonisa i-CAS kunye ne-Evanega ngokulungelelanisa ngokusondeleyo nomzi-mveliso wokubulala izitshabalalisi kunye namaqela aphambili kumanyathelo obudlelwane noluntu. Imizekelo ibandakanya:
I-CAS idlale indima ebalulekileyo ekuzameni ukunganyaniseki kuphando lweerekhodi zoluntu yi-US Right to Know ukufumana ulwazi malunga nentsebenziswano kumzi-mveliso wokubulala izitshabalalisi kunye nezifundiswa. Ngoku ka Amaxwebhu eMonsanto akhutshwe kwi-2019, UMonsanto wayekhathazeke kakhulu ngophando lwe-USRTK kwaye wayecwangcise ukuzama ukuyibeka njengesihlaselo "kwinkululeko yesayensi" - umyalezo ofanayo we-CAS owawusetyenziswa kwisicelo sikawonke-wonke Ukuchasa uphando.
I-CAS ihlangene kwisikhalazo kunye neBiofortified, a iqela eliphembelele ngokuchasene nemigaqo yokubulala izitshabalalisi eHawaii Ukuyalelwa kweshishini lokubulala izitshabalalisi iqela lezorhwebo, ngelixa ubanga ukuba uzimele.
The Isicwangciso seMonsanto PR ukumelana nophando lwe-USRTK lucebise ukuba isigqeba seMonsanto sifikelele kuRob Horsch kwiGates Foundation ukucela uncedo ngomzamo.
UMlawuli weCAS uSarah Evanega wayeyiTrasti kwi2017 zeBhunga laMazwe ngaMazwe loLwazi lokutya, ukutya kunye nemichiza Icandelo lePR elixhaswa ngemali ngumzi mveliso ekhusela iswekile, izongezo zokutya, ii-GMO kunye nemichiza yokubulala izitshabalalisi.
Eminye imizekelo yentsebenziswano ye-CAS namaqela oshishino ichazwe ezantsi kweli xwebhu.
Ukuphakamisa amaqela angaphambili, abathunywa abangathembekanga
Kwimizamo yayo yokukhuthaza ii-GMOs njengesisombululo “esisekwe kwinzululwazi” kwezolimo, iCornell Alliance yezeNzululwazi inikezele ngeqonga layo kumaqela aphambili kwezorhwebo kwanakwisayensi yemozulu eyaziwayo.
UTrevor Butterworth kunye neSense malunga neSayensi / STATS: Amaqabane e-CAS ngeSense malunga neSayensi / ii-STATS ukubonelela "ukubonisana kweenkcukacha-manani kwiintatheli”Kwaye wanika ubudlelwane kumlawuli weqela uTrevor Butterworth, owakhe umsebenzi wakhe wokukhusela iimveliso ezibalulekileyo kwi Amachiza, iqhekeza, ukutya okungenamsoco kwaye amashishini iziyobisi. UGcuwa ngumlawuli osungula iSense About Science USA, awayidibanisa neqonga lakhe langaphambili, iStatistical Assessment Service (STATS).
Iintatheli zichaze ii-STATs kunye neButterworth njengabadlali abaphambili kwimikhankaso yokukhusela imveliso yemveliso yamachiza (jonga Iindaba zesimo, Ijenali yeMilwaukee Sentinel, Ukuthintela kwaye IAtlantic). Amaxwebhu eMonsanto achonga Ingqondo malunga neNzululwazi phakathi "kweqabane loshishino" yayixhomekeke ekubeni ikhusele i-Roundup ngokuchasene neenkxalabo zomhlaza.
Imozulu yesayensi ye-Climate Owen Paterson: Kwi-2015, i-CAS ibambe u-Owen Paterson, ipolitiki yase-Bhritane ye-Conservative Party kwaye eyaziwayo Imozulu yesayensi yemozulu Ngubani kunciphise inkxaso-mali kwiinzame zokunciphisa ubushushu behlabathi Ngexesha lokuhlala kwakhe njengo-Mphathiswa Wezendalo e-UK. UPaterson usebenzise inqanaba leCornell ukubanga ukuba amaqela okusingqongileyo aphakamisa inkxalabo malunga neeGMOs “vumela izigidi ukuba zife.”Amaqela eshishini lezibulali zinambuzane ayesebenzisa imiyalezo efanayo kwiminyaka engama-50 eyadlulayo ukuzama Ukuhlazisa uRachel Carson yokuphakamisa iinkxalabo malunga ne-DDT.
Lynas kunye Ingqondo malunga neNzululwazi: I-Lynas ye-CAS ikwadityaniswa neSense Malunga neSayensi njengelungu lebhodi yeengcebiso yexesha elide. Ngo-2015, uLynas wadibana nesayensi yemozulu u-Owen Paterson Paterson naye wayeziva malunga noMlawuli weSayensi uTracey Brown qalisa oko wakubiza "intshukumo ye-ecomodernism," indibaniselwano yomanyano, uxinzelelo oluchasene nommiselo "yokusingqongileyo."
Ukhuseleko kumzi mveliso eHawaii
Ngo-2016, i-CAS yaphehlelela iqela elidibeneyo elibizwa ngokuba yi-Hawaii Alliance for Science, eyathi injongo yayo “kukuxhasa ukwenziwa kwezigqibo ezisekwe kubungqina kunye nokuyilwa kwezolimo kwezi ziqithi.” Abathunywa bayo baquka:
USarah Thompson, a owayesakuba ngumqeshwa weDow AgroSciences, walungelelanisa Umdibaniso weHawaii weSayensi, eyayizichaza “njengombutho osisiseko sothungelwano ongajonganga kwenza nzuzo onxulumene neCornell Alliance for Science.” (Iwebhusayithi ayisabonakali isebenza, kodwa iqela ligcina ifayile ye- page Facebook.)
Amajelo eendaba ezentlalo avela kwiHawaii Alliance yezeNzululwazi kunye nomququzeleli wayo uThompson bachaze abagxeki beshishini lezolimo njenge abantu abanekratshi nabangazi nto, ibhiyozelwe umbona kunye nesoy mono-izityalo kwaye ikhusela i-neonicotinoid pesticides leyo ezininzi izifundo kwaye ziyatsho njalo inzululwazi ziyingozi kwiinyosi.
UJoan Conrow, Ukulawula uMhleli we-CAS, ubhala amanqaku ngaye kwiwebhsayithi, nganye "Kauai Eclectic" ibhlog kunye neqela eliphambili loshishino IProjekthi yokuFunda ngokuBhala uzama ukungcolisa igama bezempilo, amaqela asekuhlaleni kwaye Abezopolitiko eHawaii oxhasa ukukhuselwa kwamayeza okubulala izinambuzane, kunye neentatheli ababhala malunga neenkxalabo zezibulali zinambuzane. IConrow inayo utyhola amaqela okusingqongileyo yokubaleka ukuhlawula irhafu kunye xa kuthelekiswa neqela lokhuseleko lokutya kwiKKK.
UConrow akasoloko echaza ubudlelwane bakhe neCornell. Iphephandaba laseHawaii le-Civil Beat lamgxeka uConrow ngenxa yakhe ukungabikho kokungafihli nto kwaye wamkhankanya ngo-2016 njengomzekelo wokuba kutheni iphepha lalitshintsha imigaqo-nkqubo yokubeka izimvo. UConrow "wayehlala ephikisana nembono ye-GMO ngaphandle kokuchaza ngokucacileyo umsebenzi wakhe njenge-GMO sympathist," kubhala unjingalwazi wobuntatheli uBrett Oppegaard. "UConrow uphulukene nenkululeko yakhe yobuntatheli (kunye nokuthembeka) ukunika ingxelo ngokufanelekileyo malunga nemicimbi ye-GMO, ngenxa yethoni yomsebenzi wakhe kule micimbi."
UJoni Kamiya, 2015 CAS UbuNkokeli beHlabathi uphikisana nemigaqo yokubulala izitshabalalisi kwiwebhusayithi yakhe Intombi yomfama waseHawaii, kwi eendaba kunye neqela eliphambili loshishino IProjekthi yokuFunda ngokuBhala. Unguye “Ingcali yonozakuzaku” kwishishini lezolimo elixhaswe ngemali intengiso kwiwebhusayithi yeempendulo zeGMO. NjengoConrow, uKamiya ubanga ukubonakaliswa kwe-pesticides eHawaii ayongxaki, yaye izama ukunyelisa amagosa anyuliweyo kwaye "Abagabadeli bendalo esingqongileyo" abafuna ukulawula amayeza okubulala izitshabalalisi.
I-CAS ichaza "njengenyathelo elisekwe kwiYunivesithi yaseConell, iziko elingenzi nzuzo." Iqela alichazi uhlahlo-lwabiwo mali, inkcitho okanye imivuzo yabasebenzi, kwaye iYunivesithi yaseCornell ayichazi naluphi na ulwazi malunga ne-CAS kwiifayile zayo zerhafu.
Uluhlu lwewebhusayithi Abasebenzi be20, kubandakanya noMlawuli USarah Evanega, PhD, kunye nokuLawula uMhleli UJoan Conrow (ayidwelisi uMark Lynas okanye abanye abantu abanokufumana imbuyekezo). Abanye abasebenzi abadumileyo abadweliswe kwiwebhusayithi babandakanya:
UGregory Jaffe, Nxibelelana noMlawuli wezeMicimbi yezoMthetho we-CAS, ukwanguMlawuli weBiotechnology yeZiko lezeNzululwazi kuMdla woLuntu apho azobe khona $ 143,000 umvuzo kunye neenzuzo. I-CSPI ichasene neelebheli ze-GMO kwaye uJaffe uthi “AmaMelika kufuneka amkele”Isityalo esikhoyo ngoku sokutya okunezakhi zofuzo.
UJayson Merkley, Elinye lamalungu ali-10 eCAS Iqela loqeqesho, usebenze njenge umcebisi kwimidiya yoluntu ka-Matshi ngokuchasene neentsomi ngokuchasene nokuguqulwa, iprojekthi ye iqela lamaqabane eshishini iBiofortified. Umzekelo wokulahlekisa imiyalezo ebandakanya iMerkley, jonga iposti ye-2016, Iqela laseCornell elixhaswe ngemali liqela elichasene noVandana Shiva.
Ibhodi yeengcebiso ye-CAS ibandakanya izifundiswa ezihlala zincedisa ishishini lezolimo kwimizamo yabo ye-PR.
Pamela Ronald, i-geneticist e-UC Davis, inamaqhina kumaqela angaphambili emizi-mveliso kunye neenzame ze-PR ezithi zizimele; Uye waseka kwaye wakhonza kwibhodi ye Ukuhlaziywa, kwaye wamisela ishishini-libotshelelwe Iprojekthi yemfuzo yokuFunda nokuBhala kunye nomsunguli wayo uJon Entine ngeqonga e UC Davis. URonald ufumana iintlawulo zeshishini ngokuthetha; Yabona I-invoyisi eyi- $ 10,000 eBayer kwaye I-invoyisi eyi- $ 3,000 ukuya eMonsanto.
UAlison Van Eenennaam, ingcali yolwandiso lwentsebenziswano e-UC Davis, uphikisa Ukucutha izilwanyana ezinobunjineli kwimfuza ayikhulisayo. Usisithethi esiphambili esingaphandle esisebenze nomzi mveliso wezolimo kwimizamo eyahlukeneyo ye-PR yokuchasa imigaqo kunye nokwenza izinto elubala.
UProfesa waseCornell uTony Shelton wayengomnye woonjingalwazi abaliqela ukugaywa nguMonsanto ukubhala amaphepha e-pro-GMO papashwa ngu iqela eliphambili loshishino IProjekthi yokuFunda ngokuBhala ngaphandle kokuxelwa malunga nendima kaMonsanto. UShelton wenza impikiswano xa wacela abafundi bakhe ukuba bangcamle isibulali zinambuzane, ngokucacileyo njenge stunt ukukhuthaza ii-GMOs.
Iingqinisiso zeSiseko seGates
Ukusukela nge2016, iGates Foundation ichithe ngaphezulu kwe- $ 4 yezigidigidi kwizicwangciso zophuhliso lwezolimo, uninzi lwazo lujolise e-Afrika. Izicwangciso zophuhliso lwezolimo zesiseko zazikhona ekhokelwa nguRob Horsch (osandula ukuthatha umhlala-phantsi), a Igqala leMonsanto engama-25. Izicwangciso-qhinga zithathe ukugxekwa ekukhuthazeni ii-GMO kunye nezolimo e-Afrika inkcaso yamaqela ase-Afrika kunye nokuhamba kwezentlalo, kwaye ngaphandle kwenkxalabo kunye namathandabuzo malunga nezityalo ezenziwe ngobunjineli kwiAfrika iphela.
Iingqinisiso zendlela yeGates Foundation kuphuhliso lwezolimo kunye nenkxaso mali zibandakanya:
Abalimi baseAfrika abasilelayo: Uvavanyo lweMpembelelo kuMdibaniso woHlaziyo oluNgcono e-AfrikaNguTimothy Wise, iTufts Global Development kunye neZiko lezeNdalo (2020)
Izithembiso ezingezizo: Umanyano lweNguquko kuHlaza eAfrikaNguRosa Luxtemburg Stiftung et. al. (Ngo-2020)
'Ukutshintsha indlala kukungondleki': Owayesakuba ligosa le-UN ubiza i-African Green Revolution, NguTimothy A. Ubulumko, iZiko lezoLimo kunye noMgaqo-nkqubo wezoRhwebo (2020)
Isiseko seGates 'sokungaphumeleli kohlaza oluhlaza eAfrika' nguStacy Malkan, iEcologist (2020)
Ngaba inguqu eluhlaza yaseAfrika isilele? UDeutsche Welle (2020)
Amaqela ase-US atyala iibhiliyoni kumashishini e-Afrika. Iingcali zithi ayiphelisi indlala okanye inceda amafama, nguLisa Held, Ukutya kwaseburhulumenteni (2020)
Imbewu yeNeo-Colonialism: Kutheni abaKhuthazi be-GMO befumana okungalunganga malunga ne-Afrika, Isiteyitimenti soMbutho woLawulo lokutya e-Afrika (2018)
Isicwangciso seGates Foundation seCeres 2030 sokuCwangcisa iAgenda yoShishino lwezolimo, NguJonathan Latham, Iindaba zeNzululwazi ezizimeleyo (2018)
IGates Foundation iqeshe iF PR ngokuQinisekisa ukuLawula iUN kwiDene Drives, nguJonathan Latham, Iindaba zeNzululwazi ezizimeleyo (2017)
I-Philanthrocapitalism: Iinkqubo ze-Gates Foundation zaseAfrika azilulo uthando, Ngu-Philip L Bereano, uNjingalwazi u-Emeritus kwiDyunivesithi yaseWashington, iTurkey Resurgence yesiThathu (2017)
Ngaba iBill kunye neMelinda Gates Foundation inceda iinkampani ezinkulu ngakumbi kunabantu abahluphekileyo? Ngu-Oscar Rickett, uSekela (2016)
UBill Gates ukwiphulo lokuthengisa ii-GMO e-Afrika, kodwa akayithethi yonke inyani, nguStacy Malkan, Alternet (2016)
Amandla aPhilayo kunye noPhuhliso. Ngubani owenza i-ajenda? NguJens Martens noKarolin Seitz, iQonga loMgaqo-nkqubo weHlabathi (2015)
Gates Foundation's Agenda yeMbewu eAfrika 'Olunye uhlobo lweColonialism,' ulumkisa abaProtestanti, NguLauren McCauley, iiNkcukacha eziqhelekileyo (2015)
Ngaba iGates Foundation ilondla njani ihlabathi? Uhlalutyo lwemali ngengxelo ye-GRAIN (2014)
UBill Gates uchitha uninzi lwezibonelelo zezolimo kumazwe atyebileyoNguJohn Vidal, uMgcini (2014)
Uphuhliso oluCwangcisiweyo: Ngaba iSiseko seGates sihlala siyimpembelelo elungileyo? Ingxelo yezoBulungisa beHlabathi ngoku (2014)
Isebenza njani iBill Bill Gates i-KFC ithathe iAfrika, NguAlex Park, uMama uJones (2014)
Olunye usebenziswano lweshishini lweCAS
Uninzi lwee-imeyile ezifunyenwe nge-FOIA yi-US Ilungelo Lokwazi, kwaye ngoku iposwe kwi I-UCSF yemizi-mveliso yamathala eencwadi, bonisa i-CAS ilungelelanisa ngokusondeleyo nomzi mveliso wezolimo kunye namaqela ayo onxibelelwano noluntu ukulungelelanisa iminyhadala kunye nemiyalezo:
UMlawuli weCAS uSarah Evanega usebenze noMonsanto Cami Ryan ukuhlela a uthotho lweeworkshops ngowama-2017 ukukhuthaza ukutya okwenziwe ngemfuza.
Ukuphendula isicelo Ukusuka kwisigqeba soovulindlela seDuPont, U-Evanega waqokelela uNjingalwazi weYunivesithi yaseFlorida uKevin Folta ukuba athethe neYunivesithi-yeShishini Consortium, iqela elisebenza ukugcina "ithuba lokhuphiswano" kumalungu alo eenkampani nakwizifundo. Nangona uFolta enayo Ulahlekise uluntu malunga nokunxibelelana kwakhe nomzi mveliso, U-Evanega umnyusile njengo “intshatsheli emangalisayo yotshintsho"Kwaye"umzekelo wenzululwazi. "
U-Evanega umeme i-CAS Ilungu lebhodi yeengcebiso uAlison Van Eenennaam, ingcali yolwandiso lwentsebenziswano e-UC Davis, ukuya Thetha eDuPont Pioneer exhaswa ngemali ICornell yokuzalela iSimposi. Ii-imeyile zibonisa u-Evanega ecela uVan Eenennaam ukuba angenise izimvo zakhe kwisindululo sikarhulumente sokulawula ii-GMO, kunye nokuxoxa ngendlela yokuphucula izixhobo zobufazi ukukhuthaza ii-GMO.
U-Evanega wakhonza kwiqela elisebenzayo Iziko le-UC Davis lokuFunda nokuFunda ngezoLimo (IFAL), ecaleni kwabasebenzi baseMonsanto kunye namaqela amabini aphambili kwimizi-mveliso, IProjekthi yokuFunda ngokuBhala kwaye Uphengululo lwezifundo. Amaqela abambisene ngokubambisana ishishini "leenkampu" ukuba qeqesha izazinzulu nabafundi ukukhuthaza nokukhusela ii-GMO kunye nemichiza yokubulala izitshabalalisi.
Iingcaphephe ezingakumbi zikaMark Lynas
UMark Lynas 'ongachanekanga, ukunyusa okukhohlisayo kwi-ajenda yezolimo - Uxwebhu lwenyani lwe-USRTK (luhlaziywa rhoqo)
UMark Lynas wagxeka ngokuxhaphaza imifanekiso yamafama aseAfrika ukukhuthaza ii-GMO, IZiko laseAfrika leZinto eziphilayo (2018)
Imbewu ye-Neo-Colonialism- Kutheni abaXhasi be-GMO beyifumana ngokungalunganga malunga ne-Afrika -Umanyano lolawulo lokutya eAfrika (2018)
Inzululwazi isaphuma kuKhuseleko lwe-GMO, NguDavid Schubert, PhD, iNtloko, iLebhu yeLebhu yeNzululwazi yeNzululwazi kunye noProfesa kwi-Salk Institute for Biological Studies, ileta yeSan Diego Union Tribune (2018)
Ubudenge Bokubanga Zonke ii-GMO Zikhuselekile, ngu-Belinda Martineau, u-PhD Biotech Salon kunye Ileta eya kwi-NYT (2015)
Imfazwe yabaGxeki ngokutya okuGuqulwe ngokutsha, NguTimothy A. Isilumko, iTanki lokutya
UNjingalwazi John Vandermeer ucela umngeni kwezendalo uMark Lynas kwii-GMOs, Ukutya kokuQala (2014)
Inzululwazi, iDogma kunye noMark Lynas, NguDoug Gurian-Sherman, PhD, uManyano lweeNzululwazi eziKhathazayo (ngo-2013)
Amabango alahlekisayo enziwe ngu-kwaye malunga noMark LynasUkubukela kweGM (2013)
Kwiintsomi nakumadoda: UMark Lynas kunye naMandla aNxilisayo eTekhnoloji, Ngu-Eric Holt-Giménez, PhD, uMlawuli woKutya kokuQala / iZiko loMgaqo-nkqubo woKutya kunye noPhuhliso, iHuffington Post (2013)
Inzululwazi: Ubunjineli bemfuza busekwe kuLwazi olungaphelelanga ngokugqibeleleyo, Q&A noJohn Vendermeer (2013)
Amacandelo ama-22 eNzululwazi yeJunk avela kwiLynas ManifestoNguBrian John, PhD, iZiko loPhando ngePermaculture (2013)
Ukurhoxiswa kukaMark Lynas 'ukubuyela umva kweMGOONguJason Mark, Ijenali yeSiqithi seMhlaba (ngo-2013)
Ukutya kwengqondo, GMO, Uphando lwethu, Pesticides, Abangcamli I-ACSH, UAlison Van Eenennaam, Ibhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo, U-Anthony Shelton, I-BASF, Bayer, Ukuhlaziywa, CBI, Iziko leNkululeko yoMthengi, Iziko lezeNzululwazi eluntwini, ICornell Alliance yeNzululwazi, Ikholeji yaseCornell yezoLimo kunye neNzululwazi yezoBomi, ICornell Ofisi yeeNkqubo zaMazwe ngaMazwe, IBhunga leNgcaciso yeBiotechnology, I-CSPI, I-Dow AgroSciences, DowDuPont, ecomodernism, IGates Foundation, IProjekthi yokuFunda ngokuBhala, UGil Ross, IiNkokheli zeNkokheli zeHlabathi, Iimpendulo zeGMO, UGregory Jaffe, Umdibaniso weHawaii weSayensi, Intombi yomfama waseHawaii, UJayson Merkley, UJoan Conrow, UJoni Kamiya, IKauai Eclectic, UKevin Folta, Matshi ngokuchasene neentsomi ngokuchasene nokuguqulwa, UMark Lynas, IMonsanto, UOwen Paterson, Pamela Ronald, URick Berman, URob Horsch, USarah Evanega, Sarah Thompson, Iprojekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala yeNzululwazi, Ingqondo malunga neNzululwazi, STATS, ISyngenta, UTracey Brown, UTrevor Butterworth, IYunivesithi yaseCalifornia Davis, Yunivesithi yaseFlorida
Iimpendulo ze-GMO liPhulo lokuThengisa kunye ne-PR kwiinkampani zezibulala-zinambuzane
ezaposwa ngomhla Agasti 31, 2020 by UStacy Malkan
Iimpendulo zeGMO ngoku zixhaswa ngemali ICropLife yaMazwe ngaMazwe, Iqela lezorhwebo elimele ezona nkampani zinkulu zezibulali zinambuzane kwaye liqhutywa Ifekthum yobudlelwane boluntu. (Ngaphambili yayixhaswe liqela lezemveliso yezibulala-zinambuzane iBhunga leNgcaciso yeBiotechnology ivaliwe ngo-2019.)
UKetchum uhlawulwe ngaphezulu kwe- $ 14 yezigidi ukuqhuba iimpendulo ze-GMO ukusuka ngo-2014-2018, iirekhodi zerhafu zibonisa.
Amaxwebhu eMonsanto PR amagama e-GMO Iimpendulo njengeqabane eliphambili kushishino Khusela i-Roundup herbicides kwaye uchase elubala lwentsebenziswano kumzi-mveliso.
Iimpendulo zeGMO ihlawulwa njengeqonga apho abathengi banokufumana iimpendulo ezichanekileyo kwiingcali ezizimeleyo malunga nokutya okwenziwe ngemfuza, kwaye ezinye intatheli ziyithatha ngokungathí sina njengomthombo ongakhethi cala. Kodwa iwebhusayithi sisixhobo sokuthengisa esichanekileyo sokujikeleza ii-GMO ngokukhanya okuhle.
Ubungqina bokuba iimpendulo ze-GMO sisixhobo esilawula imeko yokusasazeka esingathembekanga.
Iimpendulo zeGMO zenziwa njengemoto yokuhambisa uluvo loluntu ngokuxhasa ii-GMOs. Kungekudala emva kweMonsanto kunye namahlakani ayo babetha inyathelo lokuvota lika-2012 ukubiza ii-GMO eCalifornia, eMonsanto zi cwangciso ukumilisela iphulo elitsha lobudlelwane noluntu ukwenza ngokutsha isidima se-GMOs. Baqesha inkampani yezonxibelelwano noluntu iFleishmanHillard (ephethwe ngu-Omnicom) iphulo lamanani asixhenxe.
Njengenxalenye yomzamo, inkampani ye-PR i-Ketchum (ekwangumnini we-Omnicom) yaqeshwa liBhunga loLwazi lwe-Biotechnology- ixhaswe ngemali nguMonsanto, iBASF, iBayer, iDow, iDupont kunye neSyngenta -Ukudala i-GMOAnswers.com. Isiza sithembisile susa ukudideka kwaye uphelise ukungathembani malunga nee-GMO zisebenzisa amazwi angahlelwanga abizwa ngokuba "ziingcali ezizimeleyo."
Kodwa bazimele kangakanani ezo ngcali?
Iwebhusayithi iyabhala amanqaku athetha ngononophelo athetha ibali elincomekayo malunga nee-GMOs ngelixa udlala phantsi okanye ungawuthobeli umngcipheko wezempilo kunye nokusingqongileyo. Umzekelo, xa ubuzwa ukuba ii-GMO ziqhubela phambili ukusetyenziswa kwezibulali zinambuzane, indawo inikezela nge-convoluted no, ngaphandle kwedatha evavanywe ngoontanga ebonisa ukuba, ewe, enyanisweni, kunjalo.
"Roundup Ready" izityalo ze-GMO zikhulise ukusetyenziswa kwe-glyphosate, a umhlaza womntu onokwenzeka, by amakhulu ezigidi zeeponti. Inkqubo entsha ye-GMO / ye-pesticide ebandakanya i-dicamba ikhokelele ekutshatyalalisweni kwe Izityalo zesoya phesheya kweMelika, kunye ne-FDA ibracing kulo nyaka ukusetyenziswa kathathu ye-2,4-D, i-herbicide endala enetyhefu, ngenxa yezityalo ezitsha ze-GMO eziyilelwe ukuyichasa. Konke oku akukho nto inokukhathazeka ngayo, ngokweempendulo zeGMO.
Imibuzo malunga nokhuselo iyaphendulwa ngeengxelo ezingezizo ezifana "nayo yonke imibutho yezempilo ekhokelayo emhlabeni isemva kokhuseleko lwe-GMOs." Asifumananga kukhankanywa ingxelo esayinwe ngoososayensi abangama-300, oogqirha kunye nabahlohli abathi kukhoakukho mvumelwano yesayensi kukhuseleko lwe-GMO,”Kwaye asifumananga mpendulo kwimibuzo esiyithumele ngale ngxelo.
Imizekelo sele iyifumene I-Ketchum PR ibhale ezinye zeempendulo ze-GMO ezisayinwe “ziingcali ezizimeleyo.”
Uluhlu olufutshane kulawulo lweengxaki PR ibhaso
Njengobunye ubungqina bokuba isiza sisithuthi esijikelezayo: Ngo-2014, iimpendulo zeGMO zazikho Uluhlu olufutshane kuluhlu lweentengiso zeCIO kudidi "Lonxibelelwano noLuntu: uLawulo lweNtlekele kunye noLawulo lweMicimbi."
Kwaye inkampani ye-PR eyenze iimpendulo ze-GMO yaqhayisa ngempembelelo yayo kwiintatheli. Kwividiyo ethunyelwe kwiwebhusayithi ye-CLIO, uKetchum waqhayisa esithi iimpendulo zeGMO “ziphantse zaphindeka kabini kumajelo eendaba e-GMO.” Ividiyo isuswe emva kokuba i-US Right to Know itsalele ingqalelo kuyo, kodwa thina ndiyigcine apha.
Kutheni iintatheli zingathemba isithuthi sentengiso esenziwe nguKetchum njengomthombo othembekileyo kunzima ukusiqonda. Ketchum, de kwaba ngu-2016 PR ngokuqinileyo eRashiya, kuye kwachaphazeleka kwi Iinzame zobuntlola ngokuchasene nokungenzi nzuzo ochaphazelekayo malunga nee-GMO. Ayisiyo ncam imbali ebolekisa ukungathembani.
Ngenxa yokuba iimpendulo ze-GMO sisixhobo sokuthengisa esidalwe saze saxhaswa ngemali ziinkampani ezithengisa ii-GMOs, sicinga ukuba ngumdlalo ofanelekileyo ukubuza: Ngaba “ziingcali ezizimeleyo” ezibolekisa ukuthembeka kwiwebhusayithi- uninzi lwazo lusebenzela iiyunivesithi zikarhulumente kwaye zihlawulwa ngabarhafi. - uzimele ngokwenene kwaye usebenza kuluntu? Okanye bayasebenza kwiligi kunye neenkampani kunye neefemu zonxibelelwano noluntu ukunceda ukuthengisa uluntu ibali elijikelezayo?
Ukukhangela ezi mpendulo, i-US Ilungelo lokwazi zingenise izicelo zoMthetho weNkululeko yoLwazi befuna imbalelwano yoonjingalwazi abaxhaswa ngurhulumente ababhalela iGMOAnswers.com okanye basebenze kwezinye iinzame zokuphucula i-GMO. Ii-FOIA zizicelo ezimxinwa ezingafakwanga lwazi lomntu okanye ulwazi, kodwa endaweni yoko bafuna ukuqonda unxibelelwano phakathi koonjingalwazi, iinkampani zezolimo ezithengisa ii-GMOs, imibutho yazo yezorhwebo kunye ne-PR kunye neenkampani zokuphembelela eziqeshiweyo ukukhuthaza ii-GMO kunye nokulwa neelebheli. ke sigcinwa ebumnyameni ngento esiyityayo.
Landela iziphumo Ilungelo laseMelika lokwazi uphando apha.
Bona yethu Umzi mveliso wePropaganda Tracker ngolwazi oluthe kratya malunga nabadlala phambili kwimichiza yobudlelwane noluntu.
Unganceda ukwandisa uphando lweLungelo lokwazi ngokuthi ukwenza umnikelo otsalelwa irhafu namhlanje.
Ukutya kwengqondo, GMO, Uphando lwethu, Pesticides I-BASF, Bayer, I-CLIO, IBhunga leNgcaciso yeBiotechnology, ICropLife yaMazwe ngaMazwe, Dow, dupont, Izicelo zeFOIA, glyphosate, Iimpendulo zeGMO, Ukujikeleza kwe-GMO, UKetchum, IMonsanto, I-Omnicom, inambuzane, Yisonge yonke, ISyngenta
Iqonga labaseTyhini abazimeleyo: Iqela elixhaswe ngemali yiKoch likhusela i-Pesticide, ioyile, amaShishini oTuba
ezaposwa ngomhla Februwari 24, 2020 by UStacy Malkan
The IQonga laBasetyhini abaMeleyo ngumbutho ongenzi nzuzo amaqabane neMonsanto, ikhusela imichiza enetyhefu ekutyeni nakwimveliso yabathengi, kwaye iphikisana nemithetho enokuthintela amandla eenkampani. Ixhaswe ikakhulu ziziseko zamaphiko asekunene ezityhala ukwaliwa kwesayensi yemozulu, IMF yaqala ngo-1991 njengenzame yokukhusela i-Supreme Court Justice (kunye negqwetha langaphambili laseMonsanto) UClarence Thomas njengoko wayejamelene nezityholo zeSexual Harassment. Kwi-2018, iqela nalo khuselwe INkundla ePhakamileyo yezoBulungisa uBrett Kavanaugh xa ejongene nezityholo zokuhlaselwa ngokwesondo, kwaye wachaza uKavanaugh njengo “Intshatsheli yabafazi."
Bona: "Dibana 'nababhinqileyo' abenza umsebenzi omdaka wabazalwana baseKoch, ” NguJoan Walsh, Isizwe
kunye uhlahlo lwabiwo-mali malunga nezigidi ezibini zeedola ngonyaka, iQonga laBasetyhini abaMeleyo ngoku lithi lisebenzela imigaqo- nkqubo “eyandisa inkululeko.” Iinkqubo zayo zibandakanya ukuphembelela nokuthethelela ukupheliswa kwemveliso enetyhefu, kunye nokuchasa ityala lezempilo kunye nokusingqongileyo kude nokungcolisa iinkampani nakwimbopheleleko yobuqu. Ngo-2, iqela gala yonyaka eWashington DC, ebibhiyozela ilungu lebhodi ye-IWF uKellyanne Conway njengentshatsheli yabasetyhini, ibixhaswe ziinkampani zemichiza nezecuba.
Funda ngakumbi malunga ne-gala kunye nabaxhasi bayo kwi-HuffPost, "Ezopolitiko zokungachumi kunye noMhlaza, ”NguStacy Malkan.
Ukuxhaswa ngemali ngamaphiko amabhiliyoni kunye neenkampani
Uninzi lwabanikeli abaziwayo beQonga laBasetyhini abaZimeleyo ngamadoda, njengoLisa Graves ixelwe iZiko leMithombo yeendaba kunye neDemokhrasi. I-IWF ifumene ngaphezulu kwe- $ 15 yezigidi kwiziseko zamaphiko asekunene ezikhuthaza ukupheliswa kwemithetho kunye nokulawulwa ngokukhululekileyo kwenkampani, ngokwe idatha eqokelelwe yiGreenpeace USA. Abanegalelo abakhokelayo be-IWF, ngaphezulu kwe- $ 5 yezigidi kwiminikelo, yi-Donors Trust kunye ne-Donors Capital Funds, iimali eziyimfihlo "zemali emnyama" edibene nee-moguls zeoyile UCharles noDavid Koch. Ezi mali zesiteshi semali ezivela kubanikeli abangaziwayo, kubandakanya neenkampani, ukuya amaqela eqela lesithathu alwela iimfuno zomdibaniso.
Umxhasi ophezulu we-IWF: imali emnyama evela kubaxhasi abangachazwanga
Iziseko zosapho zakwaKoch ziye zanegalelo ngqo ngaphezulu kwe- $ 844,115 kwaye abanye abaxhasi abaphambili babandakanya uSarah Isiseko seScaife, i Isiseko seBradley, Isiseko seRandolph (ihlumelo le Isiseko seRichardson), Kunye ISearle Freedom Trust -Bonke abaxhasi abaphambili be ukwala kwemozulu-inzululwazi iinzame namaphulo okuba khusela izibulali zinambuzane kwaye uzigcine zingalawulwa.
ExxonMobil kwaye UFilipu Morris ndifumene inkxaso-mali kwi-IWF, kunye nefemu ethengisa icuba ebizwa IWF kuluhlu lwe "izalathiso ezinokubakho zomntu wesithathu"Kwaye"abo bahlonela iimbono zethu. ” URush Limbaugh unikele okungenani ngekota yesigidi kwi-IWF, ethi "Uyamthethelela nanini na xa engena kwisondo, ”Ngokwenqaku lika-Eli Clifton kwiThe Nation.
UHeather Richardson Higgins, USihlalo weBhodi ye-IWF kunye ne-CEO yeLizwi laBafazi elizimeleyo, ingalo yokubambela ye-IWF, ibambe izikhundla eziphezulu kwiziseko ezininzi zamaphiko asekunene, kubandakanya Isiseko seRandolph, i Isiseko sikaSmith Richardson kwaye i Ububele obujikelezayo.
UKellyanne Conway, Umcebisi we-White House kunye nomphathi wephulo likaTrump, ngu Ilungu lebhodi ye-IWF. Abalawuli I-Emeritae zibandakanya U-Lynne V. Cheny, Umfazi kaDick Cheney kunye UKimberly O. Dennis, umongameli webhodi yabalawuli be Abaxhasi beTrust kunye nomongameli kunye neCEO ye ISearle Freedom Trust.
UNancy M. Pfotenhauer, owayesakuba lilungu le-Koch Industries lobbyist, washiya iiKoch Industries ukuba zibe Umongameli we-IWF ngo-2001 kwaye kamva wasebenza njengoSekela Sihlalo weBhodi yaBalawuli ye-IWF. Unembali ende ukukhuthaza amandla amdaka kunye nokunyanzeliswa kokucinywa kwemizi-mveliso engcolisayo.
I-ajenda ye-IWF ilandela ngokusondeleyo i-ajenda yokuphembelela nokuthumela imiyalezo yecuba, ioyile kunye nomdla kumzi mveliso. Nantsi eminye yemizekelo:
Ikhanyela inzululwazi yemozulu
2019 tweet kunye nenqaku Ukusuka kwiQonga laBafazi abaZimeleyo bancoma uMongameli uTrump “ngobugwenxa” ngokungenzi nto ukuthintela utshintsho lwemozulu.
Uxolo oluluhlaza Ichaza i-IWF njenge "Iqela leeKoch lokuLawulwa kweMozulu" ethe "yasasaza ulwazi olungeyonyani kwisayensi yemozulu kwaye ichaphazela umsebenzi wabakhanyela imozulu."
UJane Mayer uxele INew Yorker Ngo-2010: “Abazalwana (bakaKoch) banikele ngemali kumaqela angacacanga, afana ne-Independent Women's Forum, ekuchasayo ukuboniswa kobushushu behlabathi njengenyaniso kwezenzululwazi kwizikolo zikarhulumente zaseMerika. Kude kube ngo-2008, eli qela beliqhutywa nguNancy Pfotenhauer, owayesakuba ngumamkeli weefektri zeKoch Industries. UMary Beth Jarvis, usekela-mongameli wenkxaso-mali yaseKoch, ukwibhodi yeqela. ”
Uchasene nokufundisa inzululwazi yemozulu ezikolweni
The KwiDenver Post ngo-2010 i-IWF “icinga ukuba ukufudumala kwehlabathi 'yinto nje engekhoyo' kwaye ukuyifundisa kuyabothusa abantwana besikolo ngokungeyomfuneko.” Ngomkhankaso obizwa ngokuba "nguLwazi oLungeleleneyo woMntu wonke," i-IWF yayichasa imfundo yesayensi yemozulu ezikolweni, elo iqela ichazwe njenge “Ukothuswa kukufudumeza ubushushu emhlabeni jikelele.”
UMongameli we-IWF uCarrie Lucas ubhala malunga "ukwanda kwamathandabuzo malunga notshintsho lwemozulu" kwaye uthi "uluntu lunokuhlawula kakhulu ngenxa yolu hlaselo."
Ngo-Epreli 21, 2016 Isindululo kuMonsanto, IWF icele iMonsanto ukuba igalele i-43,300 yeedola kwimicimbi ye "Super Women of Science" eyilelwe ukuxhasa inkxaso yezopolitiko kwiProposition 65, umthetho waseCalifornia othintela iinkampani ekukhutshweni kweekhemikhali ezinobungozi kwiindlela zamanzi kwaye ifuna ukuba zazise abathengi malunga nokuvezwa kwemichiza enetyhefu. Imisitho ecetywayo ibiyinxalenye yeprojekthi ye-IWF ye “Culture of Alarmism” eyadalelwa ukuba "yenze umxholo weendaba malunga nemingcipheko abajamelana nayo abantu baseMelika kwimveliso esiyisebenzisayo, ukutya esikutyayo kunye nokusingqongileyo okujikeleze iintsapho zethu."
NgoFebruwari 2017, uMonsanto wabambisana ne-IWF kumsitho owawubizwa ngokuba “kukutya noloyiko: Ungazifumana njani iinyani kwiNkcubeko yanamhlanje yeAlarmism,” kunye I-podcast ye-IWF Kwinyanga leyo kwaxoxwa ngayo "Indlela iMonsanto evuselelwa ngayo ngabaVuseleli."
IWF ityhala amanqaku athethayo eMonsanto kunye nomzi mveliso weekhemikhali: ukukhuthaza ii-GMO kunye neyeza lokubulala izitshabalalisi, ukuhlasela ishishini lezinto eziphilayo kunye noomama abakhetha ukutya okuphilayo, kunye nokuchasana nokungafihli kwelebheli zokutya. Imizekelo ibandakanya:
Umthetho obhaliweyo weVermont we-GMO usisidenge. (Umbonisi)
Ukuphawula iilebheli ze-GMO kuya kwenza ukuba iindleko zokutya zikhuphuke. (IMF)
I-anti-GMO hype yeyona nto isisongelo kwimpilo yeentsapho. (Uhlolo lweSizwe)
Oomama abanengqiqo kufuneka batyhalele emva kwihlazo lomama kunye netyala lokukhubeka ibali lokutya okuphilayo. (I-podcast ye-IWF)
Abagxeki be-GMO bakhohlakele, bayinto engento, abantu abakumgangatho ophezulu kwaye bafuna ukukhanyela abo basweleyo. (Post New York)
Iprojekthi "yeNkcubeko yeAlarmism", esele ibizwa ngokuba yi "Project for Progress and Innovation," iqhutywa nguJulie Gunlock, obhala ii-blog rhoqo eziphikisana nokhuselo lwempilo yoluntu kunye ukukhusela iinkampani. Uchaze “ukwala kwe-FDA ukwazisa nge-e-cigarettes” njengo “ingxaki yezempilo yoluntu."
Iingxoxo 'zePhilips Morris PR'
Ngo-Agasti 2017, IWF Ukunyanzelwa kwe-FDA ukwamkela uPhilip Morris ' Imidiza ye-IQOS, bephikisa ukuba abafazi bafuna iimveliso ngenxa yezizathu ezahlukeneyo zebhayoloji ukubanceda bayeke ukutshaya iisigarethi zabo rhoqo.
Ngokucacileyo, i-FDA ayizimiselanga ukohlwaya abantu basetyhini, ngenxa yesini sabo. Okwangoku, yiyo kanye into eza kwenzeka ukuba abantu ababhinqileyo banqunyelwe kwimveliso yokuyeka ukutshaya engenakukwazi ukubanikeza ngoncedo abaludingayo lokuba bayeke imidiza yabo yesiqhelo, ”wabhala u-IWF.
Ekuphenduleni ileta ye-IWF, uStanton Glantz, PhD, uNjingalwazi wezoNyango kwiziko le-UCSF loPhando loLawulo lweCuba kunye neMfundo, uthe: “Lo ngumgangatho oqhelekileyo ka-Philip Morris PR. Akukho siqinisekiso sizimeleyo sokuba i-IQOS ikhuselekile kunemidiza okanye iyabanceda abantu bayeke ukutshaya. ”
Iintshatsheli "zokutya inkululeko"
I-IWF ihlasela i-US Food and Drug Administration “njengoonesi bakarhulumente,” umzekelo bechaza iarhente njenge “ukutya Marxists"Kwaye"ngokupheleleyo ngaphandle kolawulo”Yokukhutshwa isikhokelo ngokuzithandela kubavelisi bokutya ukusika amanqanaba esodium.
Umsitho we-IWF kaJuni ka-2017 uzame ukoyikisa uloyiko malunga nezikhokelo zempilo yoluntu
Ngo-2012, IWF yaphehlelela “Abafazi ngenkululeko yokutya"Iprojekthi" yokutyhala umva kwimeko ye-nanny kunye nokukhuthaza uxanduva lomntu "kukhetho lokutya. I-ajenda yayiquka "imigaqo yokutya, isoda kunye neerhafu zokutya, i-junk science kunye nokutya kunye nemveliso yekhaya, ulwazi olungelulo malunga nokukhuluphala kunye nendlala, kunye nezinye iinkqubo zokutya, kuquka ukutya kwesikolo."
Ukutyeba kakhulu, i-IWF izama ukushenxisa ingqalelo kude noxanduva lwenkampani nakukhetho lomntu ngamnye. Kule Udliwanondlebe noThom HartmannU-Julie Gunlock we-IWF uthi iinkampani azibekeki tyala kule ngxaki yokukhuluphala eMelika kodwa “abantu benza ukhetho olubi kwaye ndicinga ukuba abazali bajonga ngokupheleleyo.” Isisombululo, utshilo, kukuba abazali bapheke ngakumbi, ngakumbi abazali abahluphekileyo kuba banengxaki yokutya kakhulu.
Uhlasela oomama ngokuzama ukunciphisa ukubonakaliswa kwezibulali zinambuzane
I-IWF ityhala imiyalezo yemizi-mveliso, isebenzisa iindlela ezifihlakeleyo, ukuzama ukubakhuphela ngaphandle oomama abaxhalabileyo malunga nezibulala-zinambuzane; umzekelo ophambili yile 2014 New York Post inqaku, "Ubuzwilakhe be-Organic Mommy Mafia" nguNaomi Schafer Riley. Ngaphantsi kwesikhalazo sokukhalaza malunga "neentloni zomama," uRiley-ngubani Umntu we-IWF kodwa khange ayichaze loo nto kubafundi-iinzame zokuba neentloni kunye nokusola oomama abakhetha ukutya okuphilayo. Inqaku likaRiley lafunyanwa ngokupheleleyo ngamaqela angaphambili emizi-mveliso kunye nemithombo awayeyibonisa ngobuxoki njengezizimeleyo, kubandakanya Uphengululo lwezifundo, iqela eliphambili leMonsanto; i Umanyano lokutya kunye nokulima kunye noJulie Gunlock we-IWF's “Culture of Alarmism Project,” naye ongachazwanga kweli nqaku njengomqeshwa we-IWF. Ngakumbi malunga nesi sihloko, bona "Uhlaselo kwiOrganic: Ukungahoyi isayensi ukwenza imeko yezolimo ngamachiza”(I-FAIR, 2014).
Abalingani kunye namaqela angaphambili kumashishini amachiza
Amaqabane e-IWF namanye amaqela angaphambili enkampani anje nge Ibhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo, umkhuseli ophambili weekhemikhali eziyityhefu ixhaswe nguMonsanto kwaye ISyngenta, kunye nezinye imichiza, amayeza kunye necuba iinkampani kunye namaqela oshishino.
NgoFebruwari 2017 I-IWF podcast, I-ACSH kunye ne-IWF "yenze uloyiko lukaRachel Carson kwimichiza enetyhefu"
I-ACSH “ibisemva ngokupheleleyo” kwe-IWF'sinkcubeko yeleta yobungqongqo”Iinzame ezichaseneyo zokususa iikhemikhali eziyingozi kwiimveliso zabathengi.
Iziganeko ze-IWF ezihlasela oomama abaxhalabile malunga neekhemikhali eziyityhefu, ezinje ngale "hazmat parenting" si ganeko, eziziimbalasane I-ACSH kaJosh Bloom kunye nomzi mveliso weekhemikhali umbhali wonxibelelwano noluntu UTrevor Butterworth.
Ukuthintela, "IiKoch Brothers Operatives Gcwalisa iZikhundla eziPhezulu zeNdlu yeWhite House," nguLee Fang (4/4/2017)
Wesizwe, "Dibana 'nababhinqileyo' abenza umsebenzi omdaka wabazalwana bakaKoch,” nguJoan Walsh (8/18/2016)
Iziko leMidiya kunye neDemokhrasi, "Abona baNikeli baDumileyo kwiQonga laBasetyhini abaZimeleyo ngaMadoda," nguLisa Graves (8/24/2016)
Iziko leMidiya kunye neDemokhrasi, "Isiqinisekiso: iQonga labaseTyhini elizimeleyo lazalwa liKhusela uClarence Thomas kunye neLungelo lasekunene," nguLisa Graves noCalvin Sloan (4/21/2016)
Slate, "IsiQinisekiso sokuKhetha: Njani 'Abafazi boMgwebi uThomas' bajika baba ligunya elinamandla,” nguBarbara Spindel (4/7/2016)
Inyaniso, "Iqonga labaseTyhini abazimeleyo lisebenzisa uphawu lokulahlekisa ukutyhala iAjenda yamaphiko asekunene," nguLisa Graves, uCalvin Sloan noKim Haddow (8/19/2016)
Ngaphakathi Ububele,"Imali Exhasa Amaqela Abasetyhini Abagcina Imfazwe Basalwa Nemfazwe Yenkcubeko," ngu-Philip Rojc (9/13/2016)
Wesizwe, ”Qikelela ukuba leliphi iqela labaseTyhini eliRush Limbaugh elinikele ngamakhulu amawaka eeDola? Inqaku: lelona limthethelelayo nanini na engena kwisondo, ”ngu-Eli Clifton (6/12/2014)
INew Yorker, "I-Koch Brothers Covert Operations," nguJane Mayer (8/30/2010)
I-Oxford University Press, "UkuLwela ubuNina: Abasetyhini abaLondolozayo kunye nezoPolitiko zaseMelika," nguRonnee Schreiber (2008)
Ngaphakathi Ububele, "Jonga Ngubani Oxhasa ngemali eli Qela laBasetyhini baQinisekayo," nguJoan Shipps (11/26/2014)
Ukulingana nokuchaneka kokuBika, “Abasetyhini abaQinisekayo baLungele iMedia Media; Imithombo yeendaba ekugqibeleni ifumene abanye abantu basetyhini ukuba babathande, ”ebhalwe nguLaura Flanders (3/1/1996)
iposwe kuqala ngo-Okthobha 6, 2018 kwaye ihlaziywa ngoFebruwari 2020
Ukutya kwengqondo, GMO, Uphando lwethu, Pesticides Uphengululo lwezifundo, I-ACSH, Umanyano lokutya kunye nokulima, Ibhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo, Imfundo Elungeleleneyo Yomntu Wonke, Isiseko seBradley, UCarrie Lucas, UCarrie Lukas, UCharles noDavid Koch, Inkcubeko yeProjekthi yeAlarmism, Inkunzi yabaxhasi, Abaxhasi beTrust, ExxonMobil, FDA, UHeather R. Higgins, IQonga laBasetyhini abaMeleyo, Ilizwi labafazi abazimeleyo, IMF, UJosh Bloom, UJulie Gunlock, Kellyanne Conway, UKimberly O. Dennis, Abazala bakaKoch, Koch Industries, U-Lynne V. Cheney, UMary Beth Jarvis, IMonsanto, UNancy M. Pfotenhauer, UNahomi Schaefer Riley, Ububele obujikelezayo, UFilipu Morris, Isiseko seRandolph, Rush Limbaugh, Isiseko seSara Scaife, ISearle Freedom Trust, Isiseko sikaSmith Richardson, ISyngenta, UTrevor Butterworth, Abafazi ngenkululeko yokutya